သခင် အောင်ဆန်းသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်လာ၍ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက် စည်းစည်းလုံးလုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဗမာ ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းတွင် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်လည်း တာဝန် ယူခဲ့သည်။ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲရန် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ ပါတီ (နောင် ဆိုရှယ်လစ် ပါတီ) ၏ ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေး ခေါင်းဆောင် တာဝန်ကိုလည်း ယူခဲ့သည်။ ၁၉၄၀ မတ်လ အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်းဂါးမြို့၌ ကျင်းပသော အိန္ဒိယ အမျိုးသား ကွန်ဂရက် ညီလာခံသို့ တက်ရောက် ခဲ့သည်။ သခင် အောင်ဆန်းအား အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင် ဟောပြောမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးရန် ဟင်္သာတခရိုင် ရာဇဝတ်ဝန်က ဆုငွေ ၅ ကျပ်ဖြင့် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၀ သြဂုတ်လ အတွင်း မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက် အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့ အစိုးရအား မြန်မာ့ မြေပေါ်မှ လက်နက် အားဖြင့် မောင်းထုတ် နိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံခြားမှ အကူအညီ ရယူရန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ စွန့်စား ထွက်ခွာခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည် အမွိုင်၌ သောင်တင် နေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရဲဘော်များ၏ စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးမှုကြောင့် ဂျပန် အရာရှိ စူဖူကိကေအိချိနှင့် အဆက်အသွယ် ရကာ ဂျပန် နိုင်ငံသို့ ရောက်သွားသည်။ ဂျပန်ပြည်တွင် ‘ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး စီမံကိန်း’ စာတမ်း တရပ်ကို ရေးဆွဲကာ ဂျပန် စစ်အာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ ယင်း စီမံကိန်း အရ မြန်မာပြည် အတွင်းမှ မျိုးချစ် လူငယ်များကို စုစည်းကာ အလီလီ ခွဲလျက် ဂျပန်ပြည်သို့ ပို့ပေးခဲ့သည်။ ဤမျိုးချစ် လူငယ် တစုသည် ပင်လျှင် နောင်သော အခါတွင် ဗိုလ်တေဇ (ခေါ်) ဗိုလ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သည့် ရဲဘော် သုံးကျိပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤမျိုးချစ် လူငယ်များသည် ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ) ကို ယိုးဒယား (ယခု ထိုင်း) နိုင်ငံ ဘန်ကောက်တွင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဂျပန်များနှင့်အတူ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက် ခဲ့သည်။
ဂျပန် တပ်မတော်က မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပြီးသော အခါ အင်အား ကြီးထွားပြီး ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်လာသော ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ကို အင်အား လျော့ချပြီး ဗမာ့ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် (ဘီဒီအေ) အဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း သည့်အခါ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ဘီဒီအေ၏ စစ်သနာပတိ ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၄၂ ခု၊ စက်တင်ဘာလတွင် သူနာပြု ဆရာမ ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် လက်ထပ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂျပန်က ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေး ပေးသော အခါ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် စစ်ဝန်ကြီးနှင့် စစ်သေနာပတိ ဖြစ်လာသည်။ ဖက်ဆစ် ဂျပန် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး သမားများသည် မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူတို့အား ဖက်ဆစ်နိုင်ငံ၏ လက်အောက်ခံ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ သဖွယ် သဘောထား လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ အတွင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် သခင် စိုးတို့ ဦးဆောင်ပြီး ဖက်ဆစ် တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (ဖတပလ) [ဖက်ဆစ် တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (ဖဆပလ)] ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ကာ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဗမာ့ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်သည် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲ ညွှန်ကြားမှုဖြင့် ဖက်ဆစ် ဂျပန် တို့ကို အတိအလင်း စစ်ကြေညာကာ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲ ခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးနောက်တွင် ဗမာ့ တပ်မတော်ကို ဂန္ဒီ စာချုပ် အရ ဆက်လက် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် တပ်မတော်မှ နှုတ်ထွက်ကာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဖဆပလ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တိုင်းပြည် တာဝန်ကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရင်ခံ ဆာဒေါ်မန်စမစ်က ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အပါအဝင် ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များအား ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင် ကောင်စီတွင် ရာထူး လက်ခံရန် စကား ကမ်းလှမ်းသော်လည်း ဖဆပလမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များ အတိုင်း မရ၍ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတို့က လက်မခံခဲ့ဘဲ၊ ဘုရင်ခံရဲ့ စက္ကူဖြူ စီမံကိန်း တိုက်ဖျက်ရေး ကိုသာ ပြည်သူ လူထုအား စည်းရုံးကာ အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက် ခဲ့သဖြင့်၊ ပုလိပ် သပိတ် အပါအဝင် အထွေထွေ အမူထမ်း ပေါင်းစုံ သပိတ်ကြီး ပေါ်ပေါက် လာပြီး၊ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေး ရပ်တန့် သွားခဲ့ရသည်။ ဗြိတိန် အစိုးရလည်း ဘုရင်ခံ ဆာဒေါ်မန်စမစ်ကို အင်္ဂလန်သို့ ပြန်ခေါ်ပြီး၊ ဘုရင်ခံ အသစ် အဖြစ် ဆာဟူးဘတ်ရန်စ်ကို ခန့်အပ် လိုက်သည်။ ဘုရင်ခံသစ် ဆာဟူးဘတ်ရန်စ်က ဗိုလ်ချုပ်တို့ အလိုကျ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရန် စကား ကမ်းလှမ်း လာတော့သည်။ ထို ကမ်းလှမ်းချက် များကို ဖဆပလနှင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ကြပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ဖဆပလ ခေါင်းဆောင် များသည် ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင် ကောင်စီဝင် ရာထူးကို ယူလိုက် ကြသည်။ ထိုကြောင့် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ မှစ၍ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင် ကောင်စီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။ ထိုနောက် တနှစ် အတွင်း လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ရရှိရေး ဆောင်ပုဒ် အရ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ကိစ္စ ဆွေးနွေးရန် ဗြိတိသျှ လေဘာ အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ပြီး ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန်နဝါရီလတွင် လန်ဒန်သို့ သွားရောက် ခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲမှ မြန်မာနိုင်ငံအား တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ပေးမည့် အောင်ဆန်း - အက်တလီ စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေး ပေးရာတွင် ဗြိတိသျှတို့က တောင်တန်း ဒေသများကို ချန်ထား လိုသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက တောင်တန်း ဒေသ ကိုပါ တပါတည်း လွတ်လပ်ရေး ပေးရန် တောင်းဆို ခဲ့ပြီး၊ တောင်တန်း ဒေသနှင့် မြန်မာပြည်ပ ပေါင်းစည်း အတွက် အားသွန် ကြိုးပမ်း ခဲ့ပြန်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ကြိုးစား ရိုးသားမှုကြောင့် တောင်တန်း ဒေသ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၏ ယုံကြည် ကိုးစားမှု ကိုပါ ရရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတွင် အရေးပါသော တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး သင်္ကေတ ဖြစ်ခဲ့သည့် ပင်လုံ စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများ ပြီးစီး၍ လွတ်လပ်ရေး ရရန် သေချာသော အခြေအနေသို့ ရောက်သော အခါ လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲကြမည့် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွတ်တော် အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးကို ၁၉၄၇ ခု၊ ဧပြီလတွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကြီး ပြီးခါနီး အချိန် လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ တည်ထောင်ရေး အားသွန် ကြိုးပမ်း နေဆဲတွင် နယ်ချဲ့ လက်ပါးစေ ဦးစောနှင့် အပေါင်းပါ တို့၏ ရက်စက် ယုတ်မာစွာ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင် အခြားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင် အာဇာနည်ကြီးများ နှင့်အတူ၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ၁၃ ချက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ကျဆုံးချိန်တွင် သား အောင်ဆန်းဦး၊ အောင်ဆန်းလင်းနှင့် သမီး အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကျန်ရစ်သည်။
ကွယ်လွန်သူ အမျိုးသား အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြသသည် ပြည်မြို့နယ် ထုံးဘိုရွာ ဇာတိ ဖြစ်သည်။ အဖ ဦးဘိုးချွန်နှင့် အမိ ဒေါ်သက်လယ် တို့မှ ၁၈၉၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ငယ်နာမည် မောင်ဘရွှေ ဖြစ်သည်။ နှမ မမြငွေ တဦးသာ ရှိ၍ နောင်အခါ သီလရှင် ဝတ်သွားပြီး ဒေါ်ခေမာဝတီ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ သာယာဝတီ အေဘီအမ် ကျောင်းမှ သတ္တမတန်း အောင်ပြီး ဆယ်တန်းကို ရန်ကုန် ဘက်ပတစ် အထက်တန်း ကျောင်းမှ အောင်သည်။ ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ကောလိပ်နှင့် ကာလတ္တား တက္ဗသိုလ် တို့မှ အိုင်အက်စ်စီ တန်းကို ဓာတုဗေဒ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်သည်။ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ် သပိတ်မှောက် ကောင်စီတွင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း သပိတ်နောက် ပေါ်လာသော အမျိုးသား ပညာရေး ကောင်စီ တွင်လည်း အဖွဲ့ဝင် တဦး ဖြစ်ရုံမက ကြည့်မြင်တိုင် အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်လည်း လုပ်ခဲ့ ဖူးသည်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ဘီအက်စ်စီတန်းကို ဓာတုဗေဒ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အမျိုးသား ကောလိပ်မှပင် အောင်သည်။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်ခင်ညွန့်နှင့် လက်ထပ်သည်။
၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ အောင်ပြီးသော အခါ သာယာဝတီသို့ ပြန်၍ ရှေ့နေ အလုပ်ဖြင့် အသက် မွေးသည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် တောင်သူ လယ်သမား အရေးတော်ပုံတွင် အရေးတော်ပုံ သားများ ဘက်မှ ရှေ့နေ လိုက်ရာမှ ထင်ရှား လာသည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ရောက်သော် တို့ ဗမာ အစည်းအရုံး ဝင်ရာမှ သခင် ဖြစ်လာပြီး သခင်မြဟု ထင်ရှား လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် တို့ဗမာ အစည်းအရုံး၏ ကိုယ်ပွား ဖြစ်သော 'ကိုယ်မင်း ကိုယ်ချင်း အဖွဲ့' ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။ ကိုယ်မင်း ကိုယ်ချင်း အဖွဲ့၏ တာဝန် ပေးချက် အရ သာယာဝတီ တောင်ပိုင်းမှ အမတ် အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရာ အရွှေး ခံရ၍ ၉၁ ဌာနခေတ် ဥပဒေပြု လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဥပဒေပြု လွှတ်တော် အတွက် ပထမဆုံး အရွေးခံ ရသော သခင် အမတ် သုံးဦး အနက် တဦး အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ အမတ် အဖြစ် အရွေးခံ ရသော်လည်း အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့ အုပ်စိုးမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အနေဖြင့် အမတ်လစာ မယူသည့် သခင် အမတ် တဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ ပါတီ ဖွဲ့သော အခါတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေး တာဝန် ယူပြီး သခင်မြက ပြည်တွင်း ခေါင်းဆောင် တာဝန် ယူခဲ့ ရသည်။ ၁၉၄၁ ခုတွင်မူ တို့ဗမာအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တင်မြှောက် ခံရသည်။ ရဲဘော် သုံးကျိပ် ဂျပန် နိုင်ငံသို့ စစ်ပညာသင် သွားနိုင်ရေး အတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ရသူ တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ ဘမော် ဦးဆောင်သော ဂျပန်ခေတ် လွတ်လပ်ရေး အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သည်။ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး အတွက် ဖတပလကို ဖွဲ့သော အခါ ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ ပါတီကို ကိုယ်စားပြု၍ သခင်မြလည်း ပါဝင် ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ ပါတီကို မြန်မာပြည် ဆိုရှယ်လစ် ပါတီဟု ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းသော အခါ သခင်မြပင် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။ စစ်ပြီးစ ဖဆပလ အဖွဲ့၏ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် တဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်ပြီးခေတ် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဦးစီးသော ကြားဖြတ် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော် ဌာန ဝန်ကြီး တာဝန်များ ယူခဲ့ရ သူလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ယာယီ သဘာပတိ တာဝန်များ အပေး ခံရသည်။ အောင်ဆန်း - အက်တလီ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သည့် လန်ဒန်သွား မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင်လည်း ပါဝင် ခဲ့သည်။ လယ်သီစား ဥပဒေ ဋီကာ ကိုလည်း ရေးသား ခဲ့သေးသည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် အခြား ခေါင်းဆောင်ကြီးများ နှင့်အတူ မသမာ သူတို့ လက်ချက်ဖြင့် ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ စနေနေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ၂ ချက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ကျဆုံးချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်ခင်ညွန့် ကျန်ရစ်သည်။
ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုမှာ မြောင်းမြ ဇာတိ ဖြစ်သည်။ အဖ မြန်မာ ဆေးဆရာကြီး ဦးဘိုးစာနှင့် အမိ ဒေါ်မြစ် တို့မှ ၁၈၉၃ ခု၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ အသက် ၁၄ နှစ်တွင် မြောင်းမြမြို့ ဆရာ ဦးမောင်မောင် ကျောင်းမှ သတ္တမတန်းကို အထူး အောင်၍ စကောလားရှစ် ပညာသင်ဆု ရရှိ ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိန်ပေါကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာ သင်ယူရာ ၁၀ တန်းကို အထူး အောင်သောကြောင့် ပညာသင်ဆု ထပ်ရသည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ဘီအေ အထက်တန်း တက်နေဆဲ မျက်စိ ရောဂါကြောင့် တက္ကသိုလ်မှ ထွက်ခဲ့ ရသည်။ ပေါင်းတည်နှင့် ဟင်္သာတ မြို့များတွင် အစိုးရ ကျောင်းဆရာ အဖြစ် အမှု ထမ်းခဲ့သည်။ ပညာအုပ်လည်း လုပ်ခဲ့ ဖူးသည်။ ၁၉၂၀ တွင် ဒေါ်လှမေနှင့် လက်ထပ်သည်။ အမျိုးသား ကျောင်းများ ဖွင့်လာသော အခါ အစိုးရ ဝန်ထမ်းမှ ထွက်ပြီး အမျိုးသား ကောလိပ်တွင် မြန်မာစာ ဆရာ ဝင်လုပ်သည်။ အစိုးရ အထောက်အပံ့ မယူသော အမျိုးသား ကျောင်းဆရာလည်း လုပ်ခဲ့ ဖူးသည်။ တပတ် တကြိမ်ထုတ် 'မြန်မာ့ ရီဗျူးဂျာနယ်' ကို အယ်ဒီတာချုပ် အဖြစ် ဦးစီး ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။ ထိုနောက် 'ဒီးဒုတ် ဂျာနယ်' ကို ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ဦးစီး ထုတ်ဝေရာတွင် ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုဟု ထင်ရှား လာသည်။
ဆရာကြီးသည် အင်္ဂလိပ် - မြန်မာနှင့် ပါဠိ စာပေများတွင် နှံ့စပ်ပြီး ဆေးကျမ်း၊ ဗေဒင်၊ နက္ခတ်နှင့် အဂ္ဂရပ် ပညာ များကိုလည်း လိုက်စား ခဲ့သည်။ မြန်မာ သီချင်း ကြီးကိုလည်း စည်းစနစ် ကျစွာ တတ်မြောက်သူ တဦးဖြစ်သည်။ တူရိယာ ကဗျာ ဂီတကို မြတ်နိုးပြီး စောင်းကောက်ကိုလည်း ပိုင်နိုင်စွာ တီးတတ်သည်။ မြန်မာ သီချင်းကြီး သီချင်းခန့် များကို မူမှန် အတိုင်း ဖြစ်စေရန် 'ဂီတဝိသော ဓနိ' ကျမ်းကိုလည်း တည်းဖြတ် ခဲ့သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ် အတွင်း ဒီးဒုတ် နေ့စဉ် သတင်းစာကို ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် သတင်းစာ ဆရာ၊ အယ်ဒီတာ၊ စာရေးဆရာ စသည့် စာပေ သမား တဦး အနေဖြင့် ပြည်သူလူထု နိုင်ငံရေး အသိတရား နိုးကြား စေသည့် စာပေ များကိုလည်း ရေးသား ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ ပေးသော ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေး တို့ကို ဆန့်ကျင် ခဲ့သည်။ ဖေဘီယန် (Fabian) ပါတီ ကိုလည်း တည်ထောင် ခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ စာရေး ဆရာ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်ခဲ့ သေးသည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ် သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်း အဖြစ်လည်း တာဝန် ယူခဲ့သည်။ ဂျပန်ခေတ် အဓိပတိ ဒေါက်တာ ဘမော် အစိုးရ လက်ထက်တွင် အတိုင်ပင်ခံ လွှတ်တော် အမတ် အဖြစ် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ စာရေး ဆရာ အသင်း နယကလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ရရှိ ကြိုးပမ်းရန် အတွက် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းသော အခါ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော ဖဆပလ ကြားဖြတ် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့သည်။ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ တို့နှင့် အတူ အထူး အပင်ပန်း ခံ၍ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ချင်းပြည်နယ် ထီးလင်း မြို့တွင် ကျင်းပသော ချင်း - ဗမာ ချစ်ကြည်ရေး ကျောက်တိုင် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ကိုယ်စား အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး အနေဖြင့် လည်းကောင်း တက်ရောက် ခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ၊ ၃၇ မိနစ်တွင် အခြား ခေါင်းဆောင်ကြီးများ နှင့်အတူ လုပ်ကြံခံရကာ၊ သေနတ်ကျည်ဆံ ၅ ချက် ထိမှန်ခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်တွင် ကွယ်လွန်သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်လှမေနှင့် သမီး မခင်နု၊ မခင်ပု၊ မေမေခင်၊ ခင်ခင်ဦးတို့ ကျန်ရစ်သည်။
အမျိုးသား အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်သည် အငြိမ်းစား တိုက်ပိုင် အင်စပက်တော် မစ္စတာ အေရာမန်နှင့် ဒေါ်ညိမ်းလှ တို့၏ သားဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးကို မိတ္ထီလာ၌ ၁၈၉၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မန္တလေး စက်စလီ ယောက်ျား ကလေး ကျောင်းမှ ဆယ်တန်းကို ပါဠိ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူး တို့ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်တွင် ပညာ သင်နေစဉ် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ် သပိတ်တွင် ပါဝင် ခဲ့သည်။
၁၉၂၁ ခုတွင် မန္တလေး ဗဟို အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းကြီးကို ဦးစီး ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ထိုကျောင်း၌ အထက်တန်းပြ ဆရာ လုပ်သည်။ ၁၉၂၂ ခုတွင် အမျိုးသား ပညာရေး အဖွဲ့ကြီး၏ ဘီအေ စာမေးပွဲကြီးကို အောင်ခဲ့၍ အေရာဇတ် ဘီအေ (နယ်ရှင်နယ်) အမည် ခံခဲ့သည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တိုင် ဗဟို အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး အဖြစ် ထမ်းရွက် ခဲ့သည်။ ဗဟို အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းအုပ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ် ရဲညွန့်တပ် ဖွဲ့စည်းပြီး ကျောင်းသား လူငယ် များကို စစ်ပညာ သင်ပေး ရုံမက မျိုးချစ်စိတ်လည်း သွင်းပေးသည်။ ၁၉၃၈ ခုတွင် ရွှေဘိုသူ ဒေါ်ခင်ခင်နှင့် လက်ထပ်သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် စစ်အတွင်းက ပိတ်ထား ခဲ့ရသော အမျိုးသား ကျောင်းကြီးကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သော အခါ အမျိုးသား ကျောင်းတွင် ဆရာ ပြန်လုပ်သည်။ အထက် မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ဖဆပလ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်လာသည်။ မြန်မာ - မွတ်စလင် အသင်း ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီဝင် တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ကြားဖြတ် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ပညာရေးနှင့် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဌာန ဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ယူနေစဉ် အခြား ခေါင်းဆောင်ကြီးများ နှင့်အတူ မသမာသူ တို့၏ လက်ချက်ဖြင့် ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် စနေနေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ၆ ချက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ကျဆုံးချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်နှင့် သား မောင်တင်မြင့်၊ သမီး ခင်ခင်စိန်၊ သား မောင်လှကြည်တို့ ကျန်ရစ်သည်။
ကရင် အမျိုးသား အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး မန်းဘခိုင်သည် ဟင်္သာတ မြို့နယ် ယုန်တလင်းရွာ ဇာတိ ဖြစ်သည်။ အဖ ယုန်တလင်း ရွာသူကြီး မန်းပေကုန်းနှင့် အမိ ဒေါ်ပု ဖြစ်သည်။ မွေးသက္ကရာဇ်မှာ ၁၉၀၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ဖြစ်သည်။ ဟင်္သာတမြို့ အေဘီအမ် ကျောင်းတွင် ပညာ သင်ယူ ခဲ့ရာ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် သတ္တမတန်း အောင်သည်။ ကရင် ဘာသာ သင်ကျောင်း တကျောင်းကို ဦးစီး ဖွင့်လှစ် ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၇ ခုတွင် ပုသိမ် မြောက်ပိုင်းမှ အမတ် အဖြစ် အရွေး ခံရသည်။ ၁၉၃၈ ခုတွင် ပဲခူးသူ ဒေါ်ခင်နီနှင့် လက်ထပ်သည်။ ၁၉၄၁ ခုတွင် တရားရေး ဌာန အတွင်းဝန် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး တွင်လည်း ပါဝင် ခဲ့ရုံမက ကရင် - ဗမာ ချစ်ကြည်ရေးကို အထူး ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ စစ်ပြီး ခေတ်တွင် ဖဆပလ ဗဟို အမှုဆောင် လူကြီး တဦး ဖြစ်လာသည်။ ကရင် လူငယ်များ အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ကြားဖြတ် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် စက်မှု လက်မှုနှင့် အလုပ်သမား ဝန်ကြီး ဌာန ဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့်အတူ လုပ်ကြံခံရ၍ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ၁၅ ချက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
မိုင်းပွန် စော်ဘွားကြီး စပ်ခွန်ထီးနှင့် မြောက်နန်းဆောင် မဟာဒေဝီ နန်းစိန်ဥ တို့၏ သား စပ်စံထွန်းသည် ၁၉၀၇ မေလ ၃၁ ရက်နေ့ဖွား ဖြစ်သည်။ တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းစော်ဘွား သားများ အထက်တန်း ကျောင်းမှ ဆယ်တန်း အောင်သည်။ မန္တလေး ပုလိပ် အတတ်သင် ကျောင်းလည်း တက်ခဲ့ ဖူးသည်။ ထို့နောက် ပုလိပ် အရာရှိ အဖြစ် ခေတ္တ အမှု ထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၂၈ ခုတွင် စော်ဘွား အဖြစ် ခံယူ လိုက်၍ မိုင်းပွန် စော်ဘွားကြီး ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၃၂ ခုတွင် မိုးမိတ် စော်ဘွားကြီး၏ သမီး စပ်ခင်သောင်းနှင့် လက်ထပ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ ထွန်းကား လာစေရန် ကြိုးပမ်း ခဲ့သူ တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန် နိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ ခေတ်မီ စာအုပ်များ၊ ကိရိယာ တန်ဆာ ပလာများနှင့် သီးနှံ မျိုးစေ့များ ကိုပင် မှာယူ ခဲ့ဖူးသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီး၍ အင်္ဂလိပ်များ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်ဝင် လာသော် ယင်းနှင့် အတူ ပါလာသော စက္ကူဖြူ အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင် ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ တောင်တန်းနှင့် မြေပြန့် သွေးခွဲ၍ အုပ်ချုပ် သည်ကို မလိုလား၍ မြေပြန့်နှင့် တောင်တန်း စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး အတွက် လုံးပမ်းခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ပင်လုံ စာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့သည့် စော်ဘွားလည်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ကြားဖြတ် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် အတိုင်ပင်ခံ တောင်တန်း ဒေသရေးရာ ဝန်ကြီး ဖြစ်လာသည်။ ထို့ပြင် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်၏ ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ ဆပ် ကော်မတီ၊ လူနည်းစု ဆိုင်ရာ ဆပ် ကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီ များတွင် အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း တို့နှင့်အတူ လုပ်ကြံခံရကာ ပြီး၊ သေနတ်ကျည်ဆံ ၂ ချက် ထိမှန်ခဲ့ပြီး၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်၊ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သမီး စဝ်သုနန္ဒာ၊ သား စဝ်ဆေဟုန်၊ သား စဝ်ကိုင်ဖ၊ သမီး စဝ်မြင့်ကြည်တို့ ကျန်ရစ်သည်။
နတ်မောက်မြို့ ရှေ့နေ ဦးဖာ၊ ဒေါ်စုတို့၏ သားသမီး ၉ ယောက် အနက် ဦးဘဝင်းသည် အကြီးဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ အစ်ကို အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၀၁ ခု၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ၁၉၁၄ ခုတွင် နတ်မောက် အလယ်တန်းကျောင်းမှ သတ္တမတန်း အောင်သည်။ မြန်မာလို ကိုးတန်း အောင်ပြီးနောက် အလယ်တန်း ဆရာဖြစ် စာမေးပွဲလည်း အောင်သော အခါ နတ်မောက်၌ပင် ကျောင်းအုပ် ခေတ္တ လုပ်သည်။ ထို့နောက် ရေနံချောင်း၌ ကျောင်းဆရာ၊ ဘီအိုစီ စာရေး ဘဝဖြင့် ကျင်လည်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ အလွတ် ပညာသင်ကျောင်း တက်သည်။ ၁၉၂၄ ခုတွင် ရေနံချောင်း အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းမှ ဆယ်တန်းကို သုံးဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်ရုံမက ပထမလည်း ရသည်။ ၁၉၂၉ ခုတွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ သင်္ချာ ဂုဏ်ထူးတန်း အောင်၍ ဘီအက်စ်စီ ဘွဲ့ရသည်။ ပထမဆုံး တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ နတ်မောက်သားလည်း ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ရေနံချောင်း အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတွင် အထက်တန်းပြ ဆရာ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဖြူးမြို့ အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတွင် အထက်တန်း ကျောင်းအုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ ခုတွင် တောင်တွင်းကြီး မြို့မှ ဦးစံ၊ ဒေါ်ရွှေမေ တို့၏ သမီး ဒေါ်ခင်စောနှင့် လက်ထပ်သည်။ စစ်ပြီးခေတ်တွင် ရေနံချောင်း မြို့နယ် ဖဆပလ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်သည်။ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီ တွင်လည်း ပါဝင် ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ စနေနေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ၈ ချက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ကျဆုံးချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်ခင်စောနှင့် သမီး မတင်လှဝင်း၊ သား မောင်စောဝင်း၊ မောင်အေးဝင်း၊ သမီး မခင်မြဝင်း၊ သား မောင်စိန်ဝင်း၊ မောင်ထွေးဝင်းတို့ ကျန်ရစ်သည်။
ဦးအုန်းမောင်သည် မင်းဘူးမြို့ မစ္စတာ အိပ်ခ်ျဒဗလျူတရပ်(တ်)ဝန်း၊ ဒေါ်ရွှေမြင့် တို့၏ ဒုတိယသား ဖြစ်သည်။ မွေးသက္ကရာဇ်မှာ ၁၉၁၃ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက် ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝက ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် တပ်ရင်းတွင် တပ်ခွဲ တပ်ထောက် အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာတန်း အောင်သည်။ ၁၉၃၇ ခုတွင် အိုင်စီအက်(စ်) စာမေးပွဲ ဖြေသူ ၃ ဦး အနက် ပထမ ရသည်။ ၁၉၃၉ ခုတွင် မန္တလေးမြို့၊ အရှေ့နယ်ပိုင် ဝန်ထောက် အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကြီးနား အရေးပိုင် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသည်။ ထို့နောက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အတွင်းဝန် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ စနေနေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ၁ ချက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ကျဆုံးချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်သိန့်းကယ်နှင့် သား ကိုတင်မောင်သိန်း၊ ကိုကိုလှ၊ မောင်မင်းမြင့်တို့ ကျန်ရစ်သည်။
မန္တလေးမြို့ တောင်ပြင် သိပ္ပံရပ် ပင်စင်စား လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ထောက် ဦးကိုကိုလေး၊ ဒေါ်မင်းရီ တို့၏ ဆဋ္ဌမမြောက် သားဖြစ်သည်။ နဝမတန်း အထိ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီး ဦးရာဇတ်၏ သက်တော်စောင့် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင် တဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ စနေနေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို လုပ်ကြံသော မသမာသူတို့၏ လက်ချက်ဖြင့် သေနတ်ဒဏ်ရာ ၄ ချက် ထိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
(၁) စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ အမှတ် (၂၂) မှ မှူးသက်ရှည်၏ "ဇူလိုင် ၁၉ နှင့် သူတို့ ၉ ဦး" (သမိုင်းတကွေ့ မှတ်တမ်း)။
(၃) ၁၉၆၀ ခုနှစ်ထုတ်၊ သမဂ္ဂ အိုးဝေ နှစ်လည် စာစောင်။
(၄) အာဇာနည်နေ့ တို့မမေ၊ ကြည်လွင်၊ မြန်မာသစ် ရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် (၁၅)၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၀၊ နှာ ၉၆-၉၉။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, July 17, 2010
တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေတ်က သခင်အောင်ဆန်း သခင်တင်မောင် (ကျုံးမငေး)
၁၃၀၀ ပြည့်နှစ် အရေးတော်ပုံအတွင်း မော်လမြိုင်ညီလာခံအတွက် တို့ဗမာသခင်အပေါင်းတို့ ကိုယ့်တာဝန်နှင့်ကိုယ် အလုပ်များနေကြစဉ်၊ ကျွန်တော်မှာလည်း သခင်အောင်ဆန်း၏ သံကြိုးရိုက်ခေါ်မှုကြောင့် ရန်ကုန် ဋ္ဌာနချုပ်သို့ ရောက်ခဲ့ရပေသည်။ သခင်အောင်ဆန်းနှင့် ပဌမအကြိမ် တွေ့ဆုံရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း ကျွန်တော်မှာ မြောင်းမြခရိုင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ပဌမဥက္ကဋ္ဌ သခင်အုံးဖေမှာ အကြောင်းမညီညွတ်၍ မလာအားသေးကြောင်း။ ကိစ္စ အဝဝကို ကျွန်တော်ပင် တာဝန်ယူမည့် အကြောင်းများကို သခင်အောင်ဆန်းအား ပြောပြသောအခါ၊ သခင်အောင်ဆန်းက “ကျုပ်တို့ အစည်းအရုံးမှာ ပဌမ အင်အားအကြီးဆုံးကတော့ ခင်ဗျားတို့ မြောင်းမြခရိုင်၊ ဒုတိယကတော့ သာယာဝတီပဲဗျ၊ ငွေရေး ကြေးရေး အတောင့်ဆုံးကတော့ ထားဝယ်ခရိုင်ပဲ၊ ဒီတော့ မော်လမြိုင်ညီလာခံ အောင်မြင်ရေးအတွက် ဒီသုံးခရိုင်ကို ပိုပြီး အားထားတာပဲ အစွမ်းကုန်သာ ကြိုးစားကြပေတော့ဗျာ” ဟု ပြောပြီး သခင်အောင်ဆန်းမှာ ရေချိုးခန်းသို့ ဝင်သွား ပါတော့သည်။ ကျွန်တော်မှာလည်း စပ်တငန့်ငန့် စောင့်နေရရာ မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင် ထွက်လာပြီး ကဲ - ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် ရွှေတိဂုံ သပိတ်လွှတ်တော်ကို သွားရအောင် “ဟေ့ တင်ဦး ငါ့အင်္ကျီပေးပါဦးကွ” ဟု အော်တောင်းပြီး အင်္ကျီများ ဝတ်ပါတော့သည်။ သခင်တင်ဦးမှာ ယခု အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွင် အလုပ်လုပ်နေပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်း၏ ရွှေတိုက်စိုးဝန် ဖြစ်ပါသည်။ အပေါင်လက်မှတ်မှန်သမျှ သူက သိမ်းထားရပါသည်။ ၃ လပြည့်ခါနီးတွင် “ကြည့်လုပ်ကြပါဦး” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နယ်အမှုဆောင်များ မြင့်နိုင်သော နေရာတွင် ကပ်ထားရပါသည်။ နယ်အမှုဆောင်များက မနေသာသည့်အခါ ရွေးပေးခဲ့ကြရပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်းတွင် ကိုယ်ပိုင်အဝတ်အထည် မည်မျှရှိသည်ကို အတိအကျ မသိရသော်လည်း၊ အစည်းရုံးပေါ်တွင် ရှိသမျှ သူပိုင်လိုလိုချည့် ဖြစ်ပါသည်။ တွေ့ကရာ အဝတ်အစားများကို လွယ်သလို ဆွဲဝတ်လေ့ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် သခင်သန်းထွန်း၏ သေတ္တာတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို သူချယ်လှယ်ချင်သလို ချယ်လှယ်ပါသည်၊ သခင်သန်းထွန်းမှာ ကန်တော်ကြီးစောင်းရှိ ကုလားကျောင်းတကျောင်းတွင် ဆရာလုပ်နေသည့်အတွက် သူ့လခနှင့် သူ ဝယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ သခင်သန်းထွန်းသည် အရုပ်ဆိုးသလောက် အလှအနု အလွန်ကြိုက်ပါသည်။ လုံချည်များမှာ ပန်းနုရောင်၊ ဝါနုရောင်၊ ဖက်ဖူးရောင် စသော လုံချည်များ ၄ - ၅ - ၁၀ ထည်ခန့် ရှိပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်းက ၎င်းလုံချည်များကို ခဏခဏ ယူဝတ်ပါသည်။ သခင်သန်းထွန်းမှာ သူအမြတ်တနိုးထားသော လုံချည်များကို ယူဝတ်သည့်အခါ သဘောမကျသော်လည်း ဖွင့်၍ မကန့်ကွက်ပါ။ ကွယ်ရာတွင် ‘ဒီလူတွေတော့ ဒီလိုပဲ ပါရမီ ဖြည့်နေရတယ်။ ကျုပ်ကို အနိုင်အကျင့်ဆုံး လူ နှစ်ယောက်ဟာ သူရယ် သခင်ဗဟိန်းရယ်ပဲ’ဟု ပြောပြဖူးပါသည်။ လုံချည်များကို သူဝတ်သွားလျှင်လည်း တခါဝတ် ဖြစ်ပါသည်။ သူယူဝတ်လိုက်လျှင် ဥစ္စာရှင် သခင်သန်းထွန်းက ပြန်မယူတော့ပေ။ ယူချင်လို့လည်း မကောင်းတော့ပါ၊ စွန်းထင်းပေရေပြီး ဖြစ်နေပေသည်။
သခင်အောင်ဆန်းတွင် ချစ်စရာအကောင်ဆုံး အင်္ဂါတခုမှာ လုံ့လဝီရိယဇွဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို စိတ်ပျက်နေနေ သူမပျက်၊ ဘယ်သူတွေ လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် သူလုပ်ပါသည်။ လုပ်စရာရှိလျှင် သူ့ဟာသူ လုပ်ပါသည်။ ရေးစရာ ရှိလျှင်လည်း သူ့ဟာသူ ရေးပါသည်။ အထူးဆန်းဆုံး အချက်တခုမှာ သူနှင့် သခင်သန်းထွန်း၏ (အမြင်) များ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတခုအတွက် သခင်သန်းထွန်းက သူ့အိမ်တွင် သူ ကြေညာချက်တခုကို ရေးဆွဲသည်ဆိုပါစို့။ သခင်အောင်ဆန်းက သူ့အမြင်နှင့်သူ အစည်းအရုံးတွင် ရေးဆွဲလေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းကြေညာချက်များကို တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်သောအခါ မူချင်းမှာ တထေဝါတည်း ဖြစ်နေလေ့ရှိပေသည်။ ဤမျှအမြင်ချင်း တူသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ စစ်ပြီးခေတ် မဆပလမှ ကွန်မြူနစ်ကို ထုတ်ပစ်သည့် အချိန်အထိ သခင်သန်းထွန်းနှင့် သခင်အောင်ဆန်း အမြင်ချင်း အလွန်တူကြပါသည်။ နောက်ပိုင်း ကွဲကြသည်မှာ အထူးပင် ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းဘွယ် ဖြစ်ပေသည်။ မည်သည့်အတွက် ကွဲကြသည်ကိုမူကား ဤဆောင်းပါးတွင် မဆွေးနွေးတော့ပေ။
သခင်အောင်ဆန်းသည် အလုပ်လုပ်စရာရှိလျှင် မိုးလင်းသည့်အထိ အလုပ် လုပ်တတ်ပေသည်။ မပြီးမချင်း မညည်းမညူ လုပ်လေ့ ရေးလေ့ ရှိပါသည်။ စိတ်လည်း အလွန်မြန်သည်။ အကြောင်းတခုခုကြောင့် စိတ်ညစ်လျှင် အလွန်သနားစရာ ကောင်းပေသည်။ ချစ်စရာလည်း ကောင်းပါသည်။ သို့အတွက် သခင်အောင်ဆန်း စိတ်ဆိုး စိတ်ညစ်ဖြစ်နေလျှင် အားလုံးကပင် ဝိုင်း၍ သနားချစ် ချစ်ကြပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်များကို ဒုတိယ စစ်ဖြစ်ခါနီး (ဗမာထွက်ရပ်ဂုဏ်း) ကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အစည်းအဝေးတွင် ချ၍ စဉ်းစားကြသောအခါ ခဏခဏ တွေ့ရပေသည်။ ထွက်ရပ်ဂုဏ်းအရေးကို ဆန့်ကျင့်သူများနှင့် နားလည်မှု မရနိုင်ဘဲ အပြင်းအထန် ငြင်းခုံနေကြစဉ် သခင်အောင်ဆန်း၏ စိတ်ညစ်သည့် မျက်နှာထားမှာ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် သနားစရာ ကောင်းပေသည်။ အချို့အမှုဆောင်များမှာ သူ့ကို သနားသည်နှင့် “ကဲ - မှားရင်လည်း မှားပေစေ။ ဒီလူဟာ ဒါလောက်တော့ ညံ့မှာမဟုတ်ဘူး၊ သူစေတနာကို ကျုပ်တို့ ယုံကြည်တယ်။ သူ့ဘက်ကပဲ ကျုပ်တို့ ထောက်ခံမယ်” ဆိုပြီး ထောက်ခံကြသည်ကိုပင် တွေ့ရပါသည်။
တနေ့တွင် ဗမာထွက်ရပ်ဂိုဏ်း အာဏာပိုင် အမှုဆောင်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ သခင်ဗဟိန်း၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံးမှ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်လှဖေ (ယခု ဗိုလ်လက်ျာ)နှင့် ကျွန်တော်တို့ ဒေါက်တာဗမော်အိမ်သို့ သွားကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂုဏ်း ဝါဒစည်းမျဉ်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲရန် အဖွဲ့ငယ်တခု ဖွဲ့ရာတွင် ဒေါက်တာဗမော်က ချယ်ယာမင်၊ သခင်အောင်ဆန်းက အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အရွေးခံရပါသည်။ အမှုဆောင်များက ၎င်းအဖွဲ့ငယ်၏ စည်းမျဉ်းဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အကြမ်းမူကို မည်သည့်နေ့တွင် တင်ပြနိုင်မည်နည်းဟု မေးရာ။ ဒေါက်တာ ဗမော်က တနင်္ဂနွေ နှစ်ပါတ်အတွင်း တင်ပြမည်ဟု ဖြေသည်ကို သခင်အောင်ဆန်းက ဒီလောက်အလုပ်ကလေးကို ဒီလောက်အချိန်ယူ လုပ်နေရင်၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးသာ ဆိုလျှင် ၁၀ နှစ်နဲ့ ပြီးနိုင်ပါတော့မလားဟု ပြောကာ “ကဲ - ခင်ဗျားတို့ လက်ဖက်ရည် သောက်နေတုံး ကျုပ်ပြီးအောင် ရေပြီး ၂ နာရီအတွင်း တင်ပြမည်” ဟုပြောကာ အခန်းထောင့်တခုသို့ ထသွားပြီး ရေးလေတော့၏။ အားလုံးလူကြီးများမှာ အံ့အားသင့်ပြီး စောင့်နေကြရပါသည်။ နှစ်နာရီခန့်အကြာတွင် အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားသော သူအကြမ်းမူကို တင်ပြပါတော့သည်။ စကားလုံးအနည်းငယ်ကို ပြင်သည်မှတပါး အားလုံးသောအချက်များကို လက်ခံလိုက်ကြရပါသည်။ ဤတွင် လူကြီးပိုင်းက နိုင်ငံရေးသမားများသည် သခင်အောင်ဆန်း၏ ထက်မြက်ပုံ အဘက်ဘက်က အရည်အခြင်း ပြည့်စုံပုံများကို တီးတိုးချီးမွမ်း ကြပါတော့သည်။
တခါသော် ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ နှစ်ဦးတွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမှုဆောင်ညီလာခံကို မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပနေစဉ်၊ ဆာစတက်ဖို့ကရစ်ပ်စ် ယခု ဘိလပ်ရွှေတိုက်စိုးဝန်ကြီး ဗမာပြည်သို့ ရောက်လာပါသည်။ သခင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ရန် မန္တလေးသို့ လိုက်လာပါသည်။ အမှုဆောင်များနှင့် တွေ့ကြရာ၊ ဗမာနိုင်ငံရေး အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကရစ်ပ်စ်မှာ ဗမာ့ အခြေအနေနှင့် သခင်များအကြောင်းကို ဘုရင်ခံနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြောပြချက်များကို အခြေခံထားပြီး ဆွေးနွေးဟန်တူပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်းနှင့် သခင်သန်းထွန်းတို့က တကဲ့ အခြေအနေ အမှန်များနှင့်တကွ၊ ဗမာလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို အသေးစိတ် တိတိလင်းလင်း ပြောပြကြရာ၊ ကရစ်ပ်စ်က “ကျူပ်အစက ခင်ဗျားတို့ လူငယ်တွေအပေါ်မှာ တော်တော်အထင်သေးမိတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့ ပြောပြတဲ့ လေးနက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ မွန်မြတ်တဲ့ လမ်းစဉ်တွေအတိုင်းဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုဟာ တရားပါတယ်” ဟု ချီးကျူးဝန်ခံ သွားရပေသည်။ သခင်အောင်ဆန်း၏ တည်ကြည် လေးနက်သော မျက်နှာကို အစဉ်သဖြင့် စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ပြီး အကဲခတ်နေသည်ကိုလည်း သတိထားမိပါသည်။ တခါတရံ တုန်လှုပ်ခြောက်ချားခြင်း ဖြစ်တတ်သည်မှတပါး၊ မြင်တွေ့သူတိုင်းက မလေးစားဘဲ မနေနိုင်လောက်အောင် လေးနက်သော သဘောထား၊ လေးနက်သော မျက်နှာပေးနှင့် လေးနက်သော စကားလုံးများကို ပိုင်ဆိုင်သူမှာ သခင်အောင်ဆန်းပင် ဖြစ်သည်။
တခါသော် ဟင်္သာတခရိုင် ညီလာခံကို ဇလွန်မြို့တွင် ကျင်းပနေပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်းနှင့် ကျွန်တော်မှာ ဋ္ဌာနချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ရန် ဇလွန်သို့ သွားကြရပါသည်။ ညီလာခံအပြီး ရန်ကုန်သို့အပြန်တွင် ဒေါင့်ကြီးရွာ အစည်းအရုံး၏ ဘိတ်ခေါ်ချက်အရ တရားပွဲတခု ကျင်းပပါသည်။ တရားပွဲတွင် ကျွန်တော် ပထမ ဟောပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်း အလှည့်ရောက်၍ ၁၀ မိနစ်ခန့် စကားပြောနေစဉ် ပုလိပ်အရာရှိတဦး ဝင်ရောက်လာပြီး နို့တစ်စာတခု ပေးပါသည်။ နို့တစ်စာတွင် ရာဇဝတ်ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဇေးဗီးယားက ချင်းတောင်နယ် အကြောင်းများ နိုင်ငံရေး တရားပွဲများတွင် ထည့်မဟောရ။ ဟောလျှင် ကာကွယ်ရေး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဟု ဖြစ်ပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်းက နို့တစ်စာကို ပရိသတ်အား ဖတ်ပြပြီး၊ “ကဲ ချင်းတောင်နယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြရဲ့လား၊ ဒီကိစ္စကို ကျုပ်မေ့နေတယ်။ အခုနို့တစ်စာ ရောက်လာမှ သတိရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ချင်းတောင်နယ်အကြောင်း သိချင်ကြသလား” ဟု မေးလိုက်ရာ ပရိသတ်က “သိချင်တယ်၊ သိချင်တယ်” ဟု ဝိုင်းအော်ကြ၏။ သခင်အောင်ဆန်းလည်း ချင်းတောင်နယ် အကြောင်းကို စေ့ငှစုံလင်စွာ ဟောပြပါတော့သည်။
(၎င်းအချိန်တွင် ချင်းတောင်နယ်၌ ယခု ချင်းဝန်ကြီး ဖြစ်နေသူ ဦးဝမ်းသူမောင်မှာ နယ်ချဲ့သမားတို့၏ အနှိပ်အစက် အညှဉ်းအပန်း ခံနေရ၏ ဗမာပြည် နီုင်ငံရေး အသင်းအပင်းများမှ ယခုကဲ့သို့ နယ်ချဲ့သမားက လူနည်းစု ခေါင်းဆောင်တယောက်အား နှိပ်စက်နေသည်ကို အရေးတယူ ဆူပူဆောင်ရွက်သော အသင်းမှာ၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံးသာ ရှိပေသည်။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံး၏ သဘောထားမှာ လူနည်းစုအရေးကို အထူပင် ဦးစားပေးခဲ့လေသည်။)
၎င်းတရားပွဲ ပြီးလျှင် ပြီးခြင်း၊ သခင်အောင်ဆန်းနှင့် ကျွန်တော်အား ကာကွယ်ရေး ဥပဒေနှင့် ဖမ်းဆီးဝရမ်း ထုတ်လိုက်လေသည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်မှာ ဟင်္သာတမြို့ရှိ မြန်မာပုလိပ်အရာရှိကြီး တဦး၏ အကူအညီနှင့် လွတ်ထွက်လာပြီး ရန်ကုန်မြို့ ၅၃ လမ်းရှိ အိမ်တအိမ်တွင် ပုန်းနေကြလေသည်။ ၎င်းရက်အတွင်း သခင်အောင်ဆန်းအား ဖမ်းပေးလျှင် သို့မဟုတ် သတင်းပေးနိုင်လျှင် ဆုငွေ ၅ိ ပေးမည်ဟု မစ္စတာ ဇေးဗီးယားက ကျေညာလေတော့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပုန်းနေရစဉ်၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံး ခေါင်ဆောင်များမှာ တကွဲတပြားစီ ဖြစ်နေကြသည်။ သခင်နု၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဗဟိန်း စသော သူများမှာ ထောင်ထဲတွင် ရှိကြပြီး သခင်မြ၊ သခင်လှဘော်၊ သခင်လှဖေ (ယခု ဗိုလ်လက်ျာ)၊ သခင်တင်မောင် စသည်တို့ အပြင်မှာ ကျန်ခဲ့ကြလေသည်။ ကျန်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင်များမှာလည်း စစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောကွဲလွဲ နေကြရာ၊ သခင်အောင်ဆန်းမှာ စိတ်အတော်ပင် ပျက်နေပေသည်။ သခင်လှဖေနှင့် ကျွန်တော်မှာ စတော့ကိတ်လမ်း လူအိုရုံအနီး သခင်နုအိမ်တွင် သခင်နုဇနီး မမရီအား စောင့်ရှောက်ရင်း ထမင်းကပ်စား နေကြရပါသည်။ များမကြာမီ သခင်အောင်ဆန်း မြန်မာပြည် အပြင်ဘက်သို့ ထွက်သွားရေး ပြဿနာ ပေါ်လာပါတော့သည်။ ၎င်းကိစ္စကို သခင်လှဖေနှင့် ကျွန်တော်ပင် ကမ္မကထ ပြုနေကြရပါသည်။ ထွက်မသွားမီ တညတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အသင်းတိုက်တွင် သခင်အောင်ဆန်း ခရီးထွက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတခု လုပ်ကြပါသည်။ ၁၂ နာရီခန့်တွင် သခင်အောင်ဆန်းအား ၅၃ လမ်း တိုက်မှ မော်တော်ကားနှင့် ကျွန်တော် သွားခေါ်လာခဲ့ရပါသည်။
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများမှာ ကိုကျော်ငြိမ်း (ယခု ဝန်ကြီးဟောင်း)၊ ကိုထွန်းအုံ (မြူနီစီပါယ်မင်းကြီး)၊ နဂါးနီ ကိုထွန်းအေး၊ ကိုလှမောင် (ယခု ဗိုလ်ဇေယျ တောခို)၊ သခင်ထွန်းရွှေ (နဂါးနီ) စသောသူများ ဖြစ်ပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်းမှာ သွားခါနီးဖြစ်သည့်အလျောက် မှာစရာ စကားများကို မှာ၍ အားမရအောင် ဖြစ်နေရှာသည်။ ၁၂ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီခွဲထိ တယောက်တည်း စကားပြောနေ လေတော့သည်။ စကားမပြောလျှင်လည်း လုံးလုံးမပြော၊ ပြောလျှင်လည်း အိပ်နေသူကိုပင် နှိုး၍ ပြောတတ်လေသည်။
လွန်ခဲ့သော ခုနှစ် နှစ်ခန့် ဗိုလ်ချုပ် အသက် ရှိစဉ်က တာရာ မဂ္ဂဇင်း လူကို လေ့လာခြင်း ကဏ္ဍ၌ "အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်း" ဟူ၍ ရေးသား ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ကပင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက "တာရာ ကတော့ ငါ့ကို အရိုင်း တဲ့ကွာ။ ငါဟာ စင်စစ်တော့ ရိုင်းသလောက် ရိုင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရိုင်းတဲ့ အချက်ကလေး တွေလည်း ရှိပါ သေးတယ်ကွာ' ဟု ပြောခဲ့သည်။
ထိုအခါက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို လူထု တရပ်လုံးက "ရွှေပေါ် မြတင်" ကြည်ညို ချစ်ခင်နေခိုက် ကျွန်တော်က "အရိုင်း" ဟု ဆိုလိုက်သော အခါ တချို့က မကျေနပ်ကြ ….။
အမှန်အားဖြင့် "အရိုင်း" ဟု တင်စား လိုက်ခြင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အား နာစေလို၍ နှိမ့်ချ ရေးသားခြင်း မဟုတ်ဘဲ သူ၏ လူ့သဘာဝ ပုံဟန်ကို ထင်ရှား ပေါ်လွင် လေအောင် ဥပမာဖြင့် ဖော်ပြ လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
သည် လူ့သဘာဝ စိတ်နေ စိတ်ထား ရုပ်ပုံလွှာကို မူတည်ကာ "နိုင်ငံရေးသမား အောင်ဆန်း" အဖြစ်ကို လေ့လာ ရပေမည်။
သည်လောက် ငယ်ရွယ်သော အသက်နှင့်၊ သည်လောက် ကြီးကျယ် ထင်ရှားသော အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် အဖြစ် နိုင်ငံရေး မော်ကွန်း တင်ထွန်း တည်ရှိ ရခြင်းမှာ သူ့၌ ထူးခြားခြင်း တရပ် ရှိရပေမည်။
သည်ထူးခြားခြင်းကား အခြား မဟုတ်။ "တခု တည်းသော ရည်ရွယ်ချက်တွင် စိုက်စိုက်မတ်မတ် ထားရှိသော စိတ်ဓာတ်" ဟု ထင်မြင် မိသည်။ တခု တည်းသော အာရုံ ရှိသော ဧကမူ စိတ်ဟု ဆိုရ ပေမည်။
သည် ဧကမူ စိတ်မှာ အပြင်ပ သဏ္ဌာန် ၌ပင် ဖော်ပြ ထင်လင်းလျက် ရှိသည်။
တက္ကသိုလ် ရောက်စက သမဂ္ဂမှ လူများစွာနှင့် ရင်းနှီး ခင်မင် ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်မှာ စာပေ လောကမှာ နေသော်လည်း စင်စစ်အားဖြင့် နိုင်ငံရေး သမားများနှင့် ပိုမိုရင်းနှီး သိကျွမ်း ခဲ့သည်သာ များသည်။
သိသော လူများ အနက် ကိုအောင်ဆန်းမှာ ထူးခြားသော ဟန်ဖြင့် ပေါ်လွင်နေ၏ ။
ထူးခြားခြင်းကား ချစ်စဖွယ် ပြုံးမြသော သခင် ဗဟိန်း ကဲ့သို့ ခင်မင်စရာ လူတယောက် ကဲ့သို့ မဟုတ်။
ကိုကြီးနုလို့ မှုန်ငေး ရီဝေသော အကြည့်ဖြင့် လူတဖက်သားကို ညှို့ယူသော စိတ်ညှို့ အိပ်ငွေ့ ချသမား ဆန်ဆန် လူမျိုးလည်း မဟုတ်။
ချစ်ခင် စွဲငြိဖွယ်ရာ မျိုးကား လုံးဝ မဟုတ်။ မှုန်ကုတ်ကုတ်။ ကြောင်စင်းစင်းနှင့် ….။
မှုန်ကုတ်ကုတ်မှာ တစုံတရာကို အာရုံ စိုက်၍ တွေးတော ကြံဆ နေသဖြင့် အတွင်းမှ လေးနက် ထက်သန်စွာ တွေးတောခြင်းမှာ အပြင် မျက်နှာ အမူအရာ၌ မျက်မှောင် ကုတ်ဟန်ဖြင့် ထင်ရှား ဖော်ပြလျက် ရှိနေသည်။ လူတို့သည် တစုံတရာကို လေးနက်စွာ တွေးတော ကြံဆသည့် အခါ မျက်မှောင်ကုတ် လာတတ်သည်။
ယင်းတို့ မျက်မှောင် ကုတ်ကာ တွေးတော ကြံဆ နေသည့် အချိန် များလာသော အခါ မှုန်ကုတ်ကုတ် ဟန်မှာ သူ၏ သဘာဝ ဖြစ်လာ တော့သည်။ သူ့ကို ဘယ်အခါ ကြည့်ကြည့်၊ မှုန်ကုတ်ကုတ် ဟန်မူနှင့်သာ တွေ့ရသည်။ ကြာတော့ ကြောင်စင်းစင်း ဖြစ်လာ ပေသည်။
ရှေ့တည့်တည့် ကြည့်နေ သော်လည်း ကြည့်ရာသို့ မျက်လုံးက မမြင်။ သူ၏ အာရုံမှာ အတွေး ၌သာ ဝင်လျက် ရှိနေ၏။
ထို့ကြောင့်လည်း သူ့ကို နှုတ်ဆက်တာ သိချင်မှ သိသည်။ သူက ပြန်၍ နှုတ်မဆက်။ လမ်းတွင် တွေ့က ခေါ်ချင်မှပင် ခေါ်သည်။ ခပ်ကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေ၏။
တခါက စိတ်ပညာ ဘက်၌ လေ့လာ နားလည်သော ဒဂုန် နတ်ရှင်နှင့် မန္တလေးသို့ အတူ သွားဖူးရာ ကျွန်တော့်အား ဝေဖန် ဖူးသည်။
"ဒဂုန် တာရာ အခန်းထဲ ဝင်လာတာကို အကဲခတ် ကြည့်နေ မိတယ်။ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာ၊ ဘယ်သူမှ အသိမရှိတဲ့ နေရာ ဝင်လာ သလိုပဲ။ စိတ်ပညာ အရတော့ အတွင်း ဝင်နေတဲ့ စိတ်လို့ ခေါ်တယ်။ အပြင်ကို မေ့နေတာ" ဟု ပြောဖူးသည်။
ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ပညာကို နားမလည်၊ အယုံအကြည်လည်း ရှိသည် မဟုတ်။ သို့သော် ဒဂုန် နတ်ရှင် ပြောပြချက်နှင့် မေ့တတ်သည့် အကျင့်ကို သုံးသပ် မိရင်း ကျောင်းတုန်းက ကိုအောင်ဆန်း၏ မှုန်ကုတ်ကုတ် ကြောင်စင်းစင်း ဟန်ကို ပို၍ နားလည် သိမြင် လာမိသည်။
သူသည် တခုတည်း ကိုသာ လေးနက်စွာ တွေးတော ကြံဆ နေသည်။ တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက် ကိုသာ စိုက်မတ် နေသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် လူများက သူ့ကို နှုတ်ဆက်တာ မမြင်လိုက်။ ခေါ်တာ မသိလိုက်။ ကြောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတွေးတော ကြံဆ နေသော တခုတည်းကား အဘယ်နည်း။ သူစိုက်မတ် နေသော အာရုံ တခု တည်းကား အဘယ်နည်း။ သည်အချက်ပင် သူ့အား နိုင်ငံရေး သမား အဖြစ် ကြီးကျယ် စေခြင်း ဖြစ်သည်။
သည် အချက်ကား အမျိုးသား တော်လှန်ရေး (ဝါ) နယ်ချဲ့လက်မှ ရုန်းထွက်သော လွတ်လပ်ရေး ပင်တည်း။
သူသည် နိုင်ငံရေး တခုတည်း ကိုသာ အာရုံ ထားသည်။ အခြား ဘာကိုမျှ ဂရု မစိုက်။
သူနှင့် စကား ပြောတိုင်း သူသည် နိုင်ငံရေး စကား ကိုသာ ပြောလျက် ရှိသည်။ ရှေ့ကို မျက်လုံးကြီး စိုက်ကာ "ဗမာပြည်ကြီး လွတ်လပ်ရေး ရအောင်" ဟု ဒလဟော စီးကျသော စမ်းရေ အဟုန်ဖြင့် သွန်ချလျက် ရှိတတ်သည်။
ထိုအခါ များတွင် ဘယ်သူမှ ကြားဖြတ် ဝင်ပြော၍ မရ။ "နေဦး၊ ကျုပ်ပြောဦးမယ်" ဟူ၍ပင် လက်ဖြင့် ကာလျက် စိတ်ပါလက်ပါ ပြောလျက် ရှိနေ၏။ ကျွန်တော်တို့မှာ ပြုံး၍သာ နေကြရသည်။ ဤမျှ နိုင်ငံရေးစိတ် ပြင်းထန်သည်။
ပြောသလောက် မက ပြောသည်ထက် လုပ်သည်။ စိုက်စိုက် စွပ်စွပ် ရွပ်ရွပ် လုပ်သည်။
ဂျပန်သို့ နိုင်ငံခြား လက်နက် အကူအညီ ရယူရန် သွားခြင်းကား အမှောင် ထဲတွင် မိုက်မိုက်ကန်းကန်း စွန့်ရမ်း သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူမျှ မသွားချင်သော ကိစ္စ ဖြစ်၏။ အဆက်အသွယ် ကောင်းကောင်း မရှိ။ မရေမရာနှင့်၊ သူပင် ဒရွပ်ထိုး သွားခဲ့၏။
အမျိုးသား တော်လှန်ရေး စိတ် (ဝါ) နိုင်ငံရေး စိတ်နှင့် သူ သွားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေ၏။ သူနှင့် အတူ ဗိုလ်န်အောင်သာ ပါသွား ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့်လည်း …. အမွိုင်တွင် ငတ်ပြတ်ကာ သောင်တင် နေခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေး ကိစ္စက လွဲ၍ အခြား ဘာမျှ ဂရုမစိုက်။ ၁၉၄၅ ခုက "အရှေ့နှင့် အနောက် အသင်း" ၌ သူပြောခဲ့သော စကားရပ်ကို ကိုးကား ပြလိုသည်။ သူ နိုင်ငံခြား သွား၍ နိုင်ငံရေး ဆက်သွယ်ပုံ အဖြစ်အပျက်။ တိုကျို ရောက်၍ ကာနယ် စူဇကီးနှင့် တွေ့ခန်း၌ ….
"တိုကျို လေဆိပ်မှာ မိနာမီလို့ ခေါ်တဲ့ ကာနယ် စူဇကီးက လာကြိုပြီး ဟော်တယ် တခု ခေါ်သွားတယ်။ သူက မိန်းမ ယူမလားလို့ မေးတယ်။ (ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီတုန်းက ရာခိုင်နှုန်း တရာပြည့် လူပျိုစစ်ပေါ့။) ကျွန်တော်တို့က ကြားရတာတောင် ရှက်ပြီး ငြင်းလိုက်တယ်။ စူဇကီးက ပြန်ပြောတာ၊ သူ့စကားနဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင် 'ရှက်စရာ မလိုဘူး၊ ရေချိုး သလို ပါပဲ' တဲ့…." ဟု ဖော်ပြ ခဲ့သည်။
အခြား ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင်များ အနက် ခင်မင် သူများက ကျွန်တော့်အား စီကာ ပတ်ကုံး ပြောပြ ဖူးကြသည်။ အခြား သူများကား မရှောင်နိုင် ခဲ့ကြ။
သူ့တွင် နိုင်ငံရေး ဟူသော တခုတည်းသော အလုပ် ရည်ရွယ်ချက်က လွဲ၍ အခြား ဘာမှ မရှိ၊ မကပ်ငြိ။ သည်နေရာ၌ "ဓနရှင် နိုင်ငံရေး သမား" မျိုးနှင့် ကွာလှ ဘိ၏။
ဝတ်ကောင်း စားလှ ဝတ်ကာ၊ စကားလုံး အလှ များကို ရွေးချယ် ဟောပြောကာ၊ လူအကြိုက်လိုက်၊ လူများနှင့် သင့်မြတ်အောင် လုပ်ကာ မီးစင် ကြည့်ကသော ကျပန်း နိုင်ငံရေး သမား မျိုးနှင့် ကွာသည်။
သူ့တွင် နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်က လွဲ၍ အခြား ကိုယ်ရေး ကြီးပွားမှု၊ ကိုယ်ရေး အာသာ ဆန္ဒ၊ ကိလေသာ ရမ္မက် ဖြည့်မှု တို့နှင့် ရောထွေး ကပ်ငြိခြင်း မရှိ။
နိုင်ငံရေး သမား အဖြစ် ပြည့်ဝ ကုံလုံခြင်း ရှိသည်။ စာပေနှင့် မကင်းကွာ။ စာပေကို အမြဲတမ်း လေ့လာ ဖတ်ရှုခြင်း ရှိသည်။ တခါက တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ၌ တနေ့လုံး ကျွန်တော်နှင့် စာပေ အကြောင်း ပြောခဲ့ကြ ဖူးသည်။
ပင်းယ မဂ္ဂဇင်း၌ ပါရှိသော "ကမ္ဘာ စာပေနှင့် ဗမာ ဂန္တဝင်" ဟူသော ဆောင်းပါးကို ရှေ့တွင်ပင် ဖတ်ကာ စေ့စေ့စပ်စပ် ကိုးကား၍ ဝေဖန်သည်။ ကျွန်တော်၏ ရတု ကဗျာနှင့် ဝတ္ထုများ ကိုပင် သိနေသည်။
"ဒီဆောင်းပါး ကတော့ ဂန္တလောကတို့၊ ဘာတို့မှာ ထည့်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒီမယ် ခင်ဗျား ကဗျာတို့၊ ဝတ္ထုတို့ချည်း ရေးမနေ ပါနဲ့ဗျာ။ နိုင်ငံရေး လှုံ့ဆော်မှု လုပ်ပေး ပါဦး။ စာရေး ကောင်းကောင်းနဲ့ တော်လှန်ရေး လုပ်မယ် ဆိုရင်…." ဟု ဆိုကာ ဂေါ်ကီ၏ ဝတ္ထု အကြောင်း ရောက်သွား တော့၏။
နိုင်ငံရေး သမားများတွင် စာပေနှင့် မကင်းကွာဖို့ လိုပေသည်။ လီနင် ဆိုလျှင် စာပေ သဘောတရားများ ရေးနိုင်ခဲ့၏။ ဂေါ်ကီ၏ ဝတ္ထုကို ကောင်းကောင်း ဖတ်ကာ ဝေဖန် ခဲ့၏။ ပလက်ကင်နော့မှာ အနုပညာ သဘောများ ရေးခဲ့၏။ မော်စီတုံးမှာ ခက်ခဲသော ကာရန်ဖြင့် ကဗျာများပင် စီကုံး ခဲ့သည်။
သခင်နု၊ သခင်သန်းထွန်း တို့သည်လည်း စာရေး ကောင်းသူများပင် ဖြစ်ကြသည်။
သခင် အောင်ဆန်းသည် စာရေး ကောင်းတဦး ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ခေတ်က ကော်ပီ စာအုပ်များဖြင့် ရေးထားသော သူကိုယ်တိုင် ရေးသည့် အတ္ထုပ္ပတ္တိ လက်ရေးမူကို သူ၏ မော်တော်ကား ရှေ့အံ၌ ထိုးထားသည်ကို မတော်မဆ ဖတ်ခဲ့ရ ဖူးသည်။
"ဥဿဟ" ဟု ပါဠိဖြင့် အမည် ပေးထားသည်။ အမှာတွင် စစ်အတွင်း၌ စစ်သေနာပတိ ဖြစ်နေခြင်းမှာ ကာလနှင့် လုပ်ခွင့် တိုက်ဆိုင် နေပုံကို ရေးထားသည်။ ငယ်စဉ်က အဖြစ်အပျက် များသာ ရှိသေးသည်။ ရေးဟန် ရှိ၍ ဖတ်ရသည်မှာ သွက်လက်သည်။ ပါဠိကို အတော် သုံးနှုန်းသည်။
နိုင်ငံရေး သမား အောင်ဆန်းသည် သည်ထူးခြားသော ဧကမူ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် လုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံရေး၌ အောင်မြင် ပါသလောဟု ဝေဖန် စောကြော အပ်သည်။
အမျိုးသား တော်လှန်ရေး၌ ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့သည်မှာ ရာဇဝင် သက်သေ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား တော်လှန်ရေး ဒီရေ တက့်ကချိန်၌ တမျိုးသားလုံးက သူ့အား ကြည်ညို လေးစား ယုံမှတ် ခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ တော်လှန်ရေး၌ ကဏ္ဍ နှစ်ဆင့် ရှိသည်။ အမျိုးသား တော်လှန်ရေး။ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး။ အမျိုးသား တော်လှန်ရေးမှာ နယ်ချဲ့ကို ခြားနားသော အရေးတော်ပုံ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး သည်ကား နယ်ချဲ့ သြဇာခံ ဖောက်ပြန်သော တော်လှန်ရေး ဆန့်ကျင်ဘက် အင်အားစု၏ ဖိနှိပ်မှုမှ လွတ်မြောက်ရေး ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် အမျိုးသား တော်လှန်ရေး ကဏ္ဍ၌ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြောင့် အမျိုးသား တော်လှန်ရေး အောင်ခဲ့ ပါသလော။ ပုဂ္ဂိုလ် အားဖြင့် အောင်သည်ကား မဟုတ်ပေ။ လူထု၏ လှုပ်ရှား ထ့ကမှု ကြောင့်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သည်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ၌ ရှေ့တန်းက ပါဝင် ခဲ့ပေသည်။
လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတွင် အောင်ဆန်း - အက်တလီ စာချုပ် ဖြင့် အဆုံးသတ် ခဲ့သည် မဟုတ်ပေ။ နု - အက်တလီ စာချုပ် ဖြင့်သာ အဆုံး သတ်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်မှ အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်း ဥပဒေကို ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ရေးဆွဲလျက် ရှိစဉ် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းမှာ ကျဆုံး ခဲ့ရ ရှာပေသည်။
သခင် အောင်ဆန်း၏ နိုင်ငံရေးတွင် အမှားများ ရှိသလောဟု ဝေဖန်မှုဖြင့် မေးဖွယ် ရှိသည်။
သခင် အောင်ဆန်း၏ နိုင်ငံရေးများကို အစဉ်တစိုက် လေ့လာ အကဲခတ် လာခဲ့သည်။ "ဗိုလ်ချုပ် လုပ်တာ အကုန် မှန်တယ်" ဟု ယုံစား သူတွေလည်း ရှိကြသည်။ "ဘာ ဗိုလ်ချုပ်လဲ၊ နယ်ချဲ့နဲ့ စေ့စပ်တာပဲ" ဟု အထင်သေးသည့် အယူအဆ ရှိသူတွေလည်း ရှိကြသည်။
ကျွန်တော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကို နိုင်ငံရေး သမား အဖြစ် လေးစား စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်သည်။ ဖဆပလ လှုပ်ရှားမှုကို အကဲခတ် နေသူ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ် လုပ်ခဲ့သည်များ အနက် သဘော မတူနိုင်သည့် အချက် များလည်း ရှိခဲ့သည်။
ကွန်မြူနစ် ပါတီကို ဖဆပလမှ ထုတ်ပယ် သည်က တကြိမ် စိတ်ပျက် မိသည်။ ကွန်မြူနစ် ပါတီသည် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ (ဝါ) အမျိုးသား တော်လှန်ရေး၌ ရှေ့တန်းက ပါခဲ့သည်။ ဖဆပလ ဟူသော ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု၌ အင်အား တအား ဖြစ်သည်။ စစ်အပြီး၌ ဖဆပလကို ဗိုလ်ချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ သခင် သန်းထွန်းက အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ဦးဆောင် ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော့် သဘောက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် သခင် သန်းထွန်းတို့ တွဲဖက် ဆောင်ရွက် သည်ကို မြင်လို၏။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံး ခေတ်က တတွဲတွဲ နိုင်ငံရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ သတ်မှတ် ကြသည်ကို သတိ ရမိ၏။
ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု ကွဲပြို မည်ကို နည်းနည်းမှ မလိုလားခဲ့။ တပ်ပေါင်းစု ကွဲပြို မည်ကို နယ်ချဲ့က အလို ရှိ၏။ ထိုအခါက နှစ်ဖက် စလုံးကို အပြစ် တင်ခဲ့၏။
ကျွန်တော်တို့က ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု ဖြင့်သာလျှင် ငြိမ်းချမ်းစွာ တည်ဆောက် နိုင်မည်ဟု ယုံကြည် ထား၏။
တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်၏ "ပညာ တတ်တွေ မလိုဘူး၊ လက်ညှိုး ထောင်တတ်ရင် တော်ပြီ" ဟု အမတ် ရွေးကောက်ပွဲ မိန့်ခွန်းကို ဖတ်ရသော အခါ စိတ်ပျက် မိပြန်သည်။
ဤအချက် များသည် အမှားလော၊ အမှန် လောဟု ဝေဖန် စိစစ် ကြရန် လိုသည်။
ယနေ့ ဖြစ်နေသော မငြိမ်သက်မှုများ၊ ညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပြဿနာ များက အဖြေများ ဖြစ်ကြ ပေသည်။ မညီညွတ်ခြင်း၏ အကျိုး အပြစ်များ၊ တင်မိလျှင် ချ၍ မရတတ်သော နိုင်ငံရေး အာဏာ အကျိုး အပြစ် သဘောများကို လူထုသည် ခံစား သိမြင် ကြပေပြီ။
ဗိုလ်ချုပ်သည် အချီးမြှောက် အယုံကြည်ခြင်း အခံရ ဆုံးသော နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ အရှိန်အဝါသည် ကြီးမား လှပေ၏။
ဗိုလ်ချုပ်၏ လမ်းစဉ်ကို လိုက်ခဲ့ ကြပါ သလောဟု ဝေဖန် ကြရန် လို၏။
ယာယီ အာဇာနည် ဗိမာန် တောင်ကုန်းသို့ တက်၍ အလေး ပြုကြသော သူတို့၏ ခြေရာများသည် မွမွ များလှ ပေပြီ။
ဗိုလ်ချုပ် လမ်းစဉ်ကို သန္နိဋ္ဌာန် ချကြ ကုန်သော ပန်းခွေ များသည် ပန်းတောကြီး တတော အဖြစ် မို့မောက် လောက်ပေပြီ။
သို့သော် အာဇာနည် ဗိမာန်သည် စက္ကူ၌ ခဲသားမျဉ်း အဖြစ်ပင် တည်ရှိ နေသေးသည်။ ဗိုလ်ချုပ် ကျောက်ရုပ်မှာ "မပြီးတတ်သေး၊ ဝိုးဝါးထွေး" ၍သာ နေခဲ့ရ ရှာသည်။
၆ နှစ်ပင် ကြာခဲ့ ပေပြီ ….။
အတိုးကြီးစားနှင် ငွေတိုး ပေးနေသော ဘာဘူ တယောက် အိမ်၌ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံ ချိတ်ထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ ရ၏။ အမှန်အားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်သည် အတိုးကြီး စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ပြပြီး မတော်မတရား လုပ်ခြင်းမျိုး ကိုကား မလိုလားအပ်။
ပန်းချီ ဆရာ ကိုအုန်းလွင် နေသော ၃၉ လမ်း ကြိမ်းထိုး ဆိုင်ရှေ့၌ စစ်အင်္ကျီ ရှည်ကြီး ဝတ်ပေး ထားသော ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ကို တွေ့ရ၏။ စစ်ဦးထုပ်၌ ပန်းများပင် ဝေနေတတ် သေး၏။ ပွဲ့နေ့ ဆိုလျှင် လမ်းထိပ် ရာဇမတ်ကွက် မဏ္ဍပ်တွင်း၌ ရောက်နေ တတ်ပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ် ကျကျနန မရှိ၍ သူတို့ လုပ်တတ် သလောက်နှင့် လုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြ ပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် နိုင်ငံရေး သမား အဖြစ် ဤမျှ အရှိန်အဝါ ပဲ့တင်သံ ကြီးမား ကျယ်ဝန်း ခဲ့သည်။ သို့သော် အုပ်ချုပ်ရေး သမား အဖြစ်ကား မဟုတ် ခဲ့ပေ။
လီနင်သည် နိုင်ငံရေး သမား အဖြစ် ဇာဘုရင် စနစ်ကို တိုက်ချ ခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေး သမား အဖြစ်နှင့် ဦးဆောင် ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရ အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် အဖြစ်လည်း နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ် ခဲ့ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထူးချွန်သော နိုင်ငံရေး သမား လည်းဖြစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေး သမားလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကား အစိုးရ အဖွဲ့ကို ကျကျနန မလုပ်ရ သေးခင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ ပေသည်။
ဂရိတ် အတ္ထုပ္ပတ္တိရေး ဆရာကြီး ပလူတာက "သေးငယ်သော အဖြစ် တရပ်၊ စကား တလုံး၊ ပြက်လုံး တကွက်က ပင်လျှင် စစ်ပွဲများ၊ လှုပ်ရှားမှု များစွာထက် လူ၏ သဘောထားကို ဖော်ပြ တတ်သည်" ဟု ရေးဖူးသည်။
ဗိုလ်ချုပ် မကွယ်လွန်ခင် မေလ လောက်က "လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့ အချိန် အထိတော့ ကျုပ် နိုင်ငံရေး လုပ်ရ ဦးမှာပဲ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးလို့ ပါတီ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျုပ်က မပါချင်ဘူး။ ဘေးဖယ် နေမယ်၊ သူများတွေ လုပ်တာ ထိုင်ကြည့်ပြီး စာအုပ် ရေးမယ်" ဟု ပြောခဲ့တာ ရှိ၏။
သူ၏ နိုင်ငံရေး အမြင် သဘောမှ လှစ်ခနဲ အန်ကျ လာသော အစက် တစက် ဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေးကား မပြီး မြောက်သေးပေ။ တဆင့်ပြီး တဆင့် သွားရသည်။ တောက်လျှောက် တက်နိုင်မှ တက်သည်။ စတာလင်က တကွေ့ပြီး တကွေ့ ခွေရစ် တက်ရ တာလည်း ရှိသည်ဟု ရေးဖူး၏။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကား အမျိုးသား တော်လှန်ရေး ကဏ္ဍ အထိ အောင်မြင် ထူးခြားသော နိုင်ငံရေး သမားကြီး ဖြစ်ပေသည်။
[ရှုမဝမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၇၄)။ ဇူလိုင်လ၊ ၁၉၅၃]
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ကိုယ်တိုင်ရေး ဘဝဇာတ်ကြောင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ဘဝဖြစ်စဉ် နေ့စွဲများ
သခင်တင်ဦး (ယခု အသံလွှင်ဌာန)
ကျွန်တော်သည် သခင်အောင်ဆန်းအား ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်တွင် ကျင်းပသော တို့ဗမာအစည်းအရုံး နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံသဘင်ကြီးတွင် စတင်မကျင်းပမီ သိကျွမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် ခင်မင်ရင်းနှီး အကျွမ်းတဝင်ကား မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ထိုညီလာခံအပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် ၇၆ ရေကျော်လမ်း တို့ဗမာအစည်းအရုံးတည်ရာ ဌာနသစ်တွင် ကျွန်တော်သည် တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ အမြဲတန်း အလုပ်သမားတဦးအဖြစ် တာဝန်လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသည့်နောက်၊ တနေ့သ၌ သခင်အောင်ဆန်းသည် သူ၏ ဟောင်းနွမ်းနေသော မွေ့ရာလိပ်ကြီးနှင့် စာအုပ်သေတ္တာ နှစ်လုံး၊ အဝတ်အစားသေတ္တာ တလုံးတို့ကို လန်ခြားနှင့် တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ သယ်ယူ ရောက်ရှိလာသည်မှအစ၊ သူနှင့် ကျွန်တော်သည် ထပ်မံတွေ့ဆုံခါ ချစ်ကျွမ်းဝင်တော့သည်။
ကျွန်တော်သည် မိမိဘာသာအလျောက် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း အေးအေးနေတတ်သူ တဦးဖြစ်ရာ။ ကျွန်တော်ထက်ပို၍ အေးပြီး ဖြစ်ကတတ်ဆန်း နေတတ်သော သူ့ကို တွေ့ရသောအခါ ဖက်မိသွားသည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်ဟူ၍ သူ့ကိုမြင်လျှင် ယုံနိုင်စရာ မရှိပေ။ ယင်းအခါ သူ့ကိုမြင်လျှင် ခေါင်းစုတ်ဖွား ရှုသိုးသိုးနှင့် လုံချီတိုတိုဝတ်ပြီးလျှင် လေယာဉ်ပျံဘိနပ်သော်၎င်း၊ ခုံဘိနပ်သော်၎င်း၊ စီးလျက်သားသာ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ထိုအခါက မော်လမြိုင်ညီလာခံမှ တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အမြဲတန်းအလုပ်သမား ဖြစ်သည်။
သို့အတွက်ကြောင့်ပင် သူသည့် အခြား အလုပ်အမှုဆောင်များနည်းတူ မိမိတို့ နေလိုရာတွင် မနေဘဲ။ အစည်းအရုံးတွင် အစည်းအရုံး၏ စည်းရုံးရေးကို လုပ်ဆောင်ရန် လာရောက်နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တခါက သူနှင့် ကျွန်တော် အစည်းအရုံးမှ မောင်ဂိုမာရီလမ်းအတိုင်း ခြေလျင်လျှောက်လာကြသည်။ သွင်ရုံအနီးတွင် သူ့အား လူတယောက်က နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ သူကမူ ပြန်၍ နှုတ်မဆက်ဘဲ ခေါင်းငိုက်ဆိုက်ဖြင့်သာ လျှောက်သွားသည်။ ကျွန်တော်က “စောစောက ခင်ဗျားကို လူတယောက်က နှုတ်ဆက်သွားတယ်၊ ခင်ဗျားမကြားဘူးလား”ဟု မေးရာ၊ ဟင် - ဟုသာ ကျွန်တော်အား တခွန်းတည်းပြောပြီး၊ သွားစရာ ဆက်သွားခဲ့သည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်ပင် သူ့အကြောင်းကို မသိသူများက လူတမျိုးဘဲ၊ ဆိုရှယ်မဖြစ်ဘူးဟူ၍ စွပ်စွဲကြသည်။
လမ်းသွားလျှင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုပြုလေ့ မရှိသည်မှာ၊ သူ့အကျင့်တခု ဖြစ်သည်။ သူကား အစဉ်းစားကြီးသူ ဖြစ်သည်။
တခါကလည်း တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ နယ်မှ သခင်ခေါင်းဆောင်တဦး ရောက်ရှိလာသည်။ ကျွန်တော်အား သခင်အောင်ဆန်းနှင့် အရေးတကြီး တွေ့လိုသည်ဟု ပြောသဖြင့်၊ အိပ်ရာထည်းတွင် စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံနေသော သခင်အောင်ဆန်းအား အစည်းအရုံး ဧည့်ခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရသည်။ ရောက်လျှင် ဘာမျှမပြော။ ကုလားထိုင်တလုံး၌သာ ထိုင်၍ ဆိတ်ဆိတ်နေသည်၊ သူ ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ ထိုင်မိလျှင် ထိုင်မိခြင်း နယ်သခင်ခေါင်းဆောင်က ၎င်းတို့နယ်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အနေအထား အခက်အခဲတို့ကို အားရပါးရ တိုင်ကြားပြောဆိုသည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုတိုင်ကြားသည်ကို အင်းမလုပ် အဲမလုပ်နေသော သခင်အောင်ဆန်းသည် ထိုသူ ပြောပြီးလျှင် ပြီးခြင်း ဘာမျှမပြောမဆို နေရာမှ ထသွားသည်။ နယ်မှလာသူလည်း ခဏတဖြုတ် တပိုတပါး သွားသည်အထင်ဖြင့် စောင့်နေသည်။ သို့သော် ငါးမိနစ်နှင့်လည်း မပေါ်လာ၊ ၁၀ မိနစ်နှင့်လည်း မပေါ်လာ။ နာရီဝက်ခန့် ကြာသောအခါ ထိုသူမှာ သည်းခံ၍ စောင်ဆိုင်းနေလိုဟန် မတူတော့ ဒေါပွလာသည်။ ကျွန်တော်လည်း သခင်အောင်ဆန်း၏ အကြောင်းကို သိပြီးဖြစ်ရာ အိပ်ခန်းတွင်းသို့ တောက်ရှောက်ဝင်သွားပြီး စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်နေသော သခင်အောင်ဆန်းအား အပြင်တွင် နယ်မှ သခင်ခေါင်းဆောင် စောင့်နေကြောင်း ပြောပြရသည်။ သူက ခြုံထားသော စောင်ကိုဖွင့်၍ “ကြည့်သာ ပြောလိုက်ပါတော့” ဟုပြောပြီး။ ပြန်၍ ခေါင်းမြီးခြုံမြဲ ခြုံ၍နေလိုက်သည်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အနားမှ ခွာထွက်လာကာ နယ်သခင်ခေါင်းဆောင်အား သခင်အောင်ဆန်းမှာ အခြားသူများကဲ့သို့ မဟုတ် နေ့တွင် အလုပ်လုပ်လေ့ မရှိ။ ညမှသာ တညလုံး စားပွဲတွင်ထိုင်ခါ အလုပ်လုပ်လေ့ရှိတဦး ဖြစ်ကြောင်း။ ယမန်နေ့ညကလည်း ၁၀ နာရီကျော်ခန့်လောက်က လင်အားကြီးအထိ အလုပ်လုပ်ရာ အိပ်ရေးပျက်သည့်အတွက် မနေနိုင်တော့ဘဲ အိပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း။ ယခုနေ့ခင်းမှ မအိပ်ပါက ခမြာ ပန်းဖျား ဖျားရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ယခုလည်း ခင်ဗျားပြောတာကို သူမှတ်သားထားပြီး မကြာမီ နယ်သို့ ညွှန်ကြားလွှာများ ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် နှစ်သိမ့်ရသည်။ ဤတွင်မှ ထိုသူလည်း ကျေနပ်ပြီး အစည်းအရုံးမှ ထွက်ခွာသွားတော့သည်။
သခင်အောင်ဆန်းမှာ လောကဝတ်ဆိုသည်မှာ အပိုအလုပ် ပကာသနသာ သဘောထားသည်။ သို့သော် သူ့အား တပါးသူက စကား ပြောဆိုသည်တို့ကို သူ့ဦးဏှောက်အတွင်းဝယ် မေ့ပျောက်မသွားအောင် စွဲမြဲမှတ်သားနိုင်သည်။ မှတ်သားနိုင်သလောက် လုပ်ဖွယ်ရာတာဝန် မပျက်ခဲ့ပေ။ လမ်းတွင် တွေ့ရှိသူများအား နှုတ်မဆက်ခြင်း၊ စကား ပြောလိုမှသာ ပြန်၍ ပြောဆိုခြင်းတို့မှာ သူ့ဝသီဖြစ်သည်။ အထင်အမြင် လွဲမှားကြသည်။ သို့သော် သူကား သူ၏ စဉ်းစားခြင်း အလုပ်မှတပါး အခြားဂရုစိုက်ခဲ့ပေ။ သူ၏ စဉ်းစားချက်မှာကား လွတ်လပ်မှုတခုတည်းသာ ဖြစ်သည်။
တခါက သူနှင့် ကျွန်တော် ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် လမ်းလျှောက်သွားကြသည်။ သခင်အောင်ဆန်းက ရုတ်တရက် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ပြီး၊ ကိုယ်သာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင် အိမ်ကရှိတဲ့ လယ်တွေယာတွေကို အကုန်လုံး ဆင်းရဲသားတွေကို ဝေပေးလိုက်မယ်။ ငွေတိုးချေးတဲ့ လူတွေကိုလည်း လျှော်ပစ်လိုက်မယ်။ အမယ်ကြီး မကျေနပ်ရင်လဲ အတင်းလုပ်ရမှာပဲဟု ပြောဖူးလေသည်။ သူသည် ဤမျှ လက်ဝါးကြီးအုပ် အရင်းရှင်များကို ရွံ့မုန်းခဲ့သည်။ တိုင်းသူပြည်သားများ အပေါ်၌လည်း ဤမျှစေတနာထားခဲ့သည်။
နေ့စဉ်လိုပင် စားချိန် သောက်ချိန်မှ လွဲ၍ အိပ်ရာထဲတွင် စောင်ခေါင်းမြီးခြုံကာ နေတတ်သည်။ အလုပ်ရှိလျှင် ညဉ့်လူခြေတိတ်ချိန် ကစ၍ မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင် တမှေးမှ မအိပ်ဘဲ အလုပ်လုပ်တတ်သည်။ ညွှန်ကြားလွှာများ၊ ကြေညာချက်များ ရေးစရာရှိလျှင် တညလုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးပြီးမှ ဘာသာပြန်လေ့ရှိ၏။
တခါကလည်း သူ အတော်ပင် အစဉ်းစား လွန်သွားခဲ့သည်။ လူပြောစရာ ဖြစ်အောင်ပင် အစဉ်းစား လွန်ခဲ့သည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးနှင့် ဓါးမပါတီတို့ ပူးပေါင်းခါ၊ ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂုဏ်းဟု ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် သခင်ခေါင်းဆောင် အချို့တို့သည် တညတွင် စတော့ကိတ်လမ်းရှိ သခင်နုအိမ်တွင် အစည်းအဝေးတရပ် ပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုအစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် သခင်အောင်ဆန်းသည် နောက်ဖေးသွားလိုသဖြင့်၊ အိမ်သာသို့ စည်းဝေးနေရင်းမှ ထသွားခဲ့သည်။ သခင်အောင်ဆန်း အိမ်သာမှ ပြန်လာပြီး သခင်နု၏ ဇနီး မမရီ အိမ်သာသို့ ဝင်သောအခါ၊ ခြေတင်သည့် နေရာတွင် မစင်များ တင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ မမရီက အိမ်သာမှ ပြန်လာပြီး ပြောရာ အားလုံးပင် ဝိုင်း၍ရယ်ကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို နောက်တနေ့တွင် မမရီက ကျွန်တော့်အား ပြောပြသည်။ သခင်အောင်ဆန်းကမူ ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂုဏ်းအကြောင်း စဉ်းစားရင်း အစဉ်းစား လွန်သွားခဲ့သည်ဟု နောက်တနေ့တွင် ကျွန်တော့်အား ပြောပြသည်။
ထိုစဉ်အခါက တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင် အဆင်းရဲခံနိုင်ဆုံး နိုင်ငံရေးသမားတဦးကို ပြပါဟုဆိုလျှင် သူ့အား ပြရပေမည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင် အမြဲတမ်း အလုပ်သမားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ထောက်ပံ့ငွေမှာ အစည်းအရုံး၏ ဘဏ္ဍာရေး ကြပ်တည်းမှုကြောင့် လပေါင်းများစွာ ပြတ်သတ်ခဲ့သည်။ သူနှင့် ကျွန်တော်အပြင် သခင်မောင်လေးနှင့် သခင်သက်တင်တို့မှာ များသောအားဖြင့် နံနက်စာကို မှန်အောင် မစားခဲ့ကြရပေ။ ညစာအတွက်မှာမူ ထိုအချိန်က ရေကျော်ညဈေးတန်းတွင် ထမင်းရောင်းချနေသော ညီအမနှစ်ယောက်က နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်ဖြင့် ကြည်ညိုပြီးလျှင် အကေ့းပေး၍သာ စားကြရသည်။ သို့သော် - ထိုဆိုင်တွင် တခါတရံ အားနာလှသဖြင့် ဗိုက်မှောက်ခါ အိပ်ကြရပါသေးသည်။
ဤမျှ သူ့တွင် စားရမဲ့၊ သောက်ရမဲ့၊ ဝတ်ရမဲ့ ဖြစ်နေစေကာမူ သူ့အား လစဉ်ကြေးငွေ လိုသမျှ ထောက်ပံ့နိုင်သော သူ့မိခင်ကြီးအား ဒုက္ခမပေးခဲ့ပေ။ တခါမျှသာ သူ့မိခင်ကြီးထံ ငွေ ၈၀ ပေးပို့ရန် စာရေးတောင်းဆိုခဲ့ဘူးသည်။
အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်ရာ၌လည်း သူ့ခေါင်းကို သူသသည်ဟူ၍ မရှိ။ အစဉ်သဖြင့် ဘိုကေမှာ ရှေ့သို့သာ ဖွားရယား ကျနေသည်။ သူစိတ်ကူး၍ ခေါင်းဖြိးသည့် အခါတွင်မူ၊ မှန်တွင်ကြည့်ပြီး မျက်နှာအမူအရာ ပြုံးတုံး လုပ်နေလေ့ရှိသည်။ ထိုအမူအရာမှာလည်း သူစိတ် ရွှင်မြူးသည့် အခါတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ သူ့အိပ်ရာမှာလည်း ဟောင်းနွမ်းနေသည့် လွှာခြင်းစောင်တထည်၊ ခေါင်းအုံး ၂ လုံးနှင့် လျှော်ဖွတ်လေ့ မရှိသော မွေ့ရာခင်းများ အပြင်၊ ဗလပွကြဲနေသော သတင်းစာ စက္ကူဟောင်းများနှင့်သာ ရောနှောလျက်ရှိသည်။ သူသည် တိုင်းပြည်အတွက် ဤမျှ အဆင်းအရဲ ခံနိုင်ရှာပေသည်။
နယ်ချဲ့စနစ်ကို သူသည် လက်နက်ကိုင်၍ တော်လှန်မှ လွတ်လပ်ရေးရမည်ဟု ထိုစဉ်အခါကပင် သူယုံကြည်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလ ညတညတွင် ပူပြင်းလှသဖြင့် သူနှင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဘိုတထောင်သင်္ဘောဆိပ်တွင် လေညှင်းခံရင်း နိုင်ငံရေးအကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ သူက အင်္ဂလိပ်ကို လက်နက်ကိုင်ပြီး မတော်လှန်ရင် ဗမာပြည် ဘယ်တော့မှ မလွတ်လပ်ဘူးဟူ၍ ကျွန်တော်အား ပြောပြသည်။ ဤစကားကိုပြောပြီး မကြာမီပင် သူသည် ဗမာပြည်မှ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဂျပန်ပြည်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။
စကားပြောရာ၌လည်း မညှာမထောက် ဘွင်းဘွင်း ပြောတတ်လေ့ရှိသဖြင့် ကျွန်တော်မှာ တခါတွင် ကြားထဲက အားအနာကြီး နာခဲ့မိသည်။ ၁၉၄၀ - ခုနှစ် ကုန်ခါနီး၊ ဂဠုံဦးစော နန်းရင်းဝန် ဖြစ်စဉ်အခါက ကျွန်တော်အား အစိုးရက ဘုန်းကြီးလမ်းတွင် တရားဟောပြောသည်ကို ပုဒ်မ ၁၂၄(က) ဖြင့် အရေးယူ ဘမ်းဆီးပြီးလျှင် ရန်ကုန်ဒီစတြိတ် ရာဇဝတ်သူကြီး ဦးဘသွင်၏ ရုံးတွင် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ (ပြည်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ကြီး) ဦးဘဂျမ်းက ကျွန်တော်ဘက်မှ ရှေ့နေအဖြစ် အခမဲ့ ကူညီလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဦးဘဂျမ်းမှာ ထိုစဉ်က ဝတ်လုံလိုက်စသာဖြစ်ရာ၊ လျှောက်လဲပုံတို့ကို သခင်အောင်ဆန်းက သူကို မကြိုက် မနှစ်သက်ခဲ့ပေ၊ အမူစစ်ဆေးသော နေ့တနေ့တွင် သခင်အောင်ဆန်း ရုံးသို့ လာရောက်နားထောင်ပြီး ဦးဘဂျမ်း လျှောက်လဲ ပြောဆိုချက်တို့ကို သူသဘော မကျကြောင်း ပြစ်တင်ပြောဆိုသည်ကို ကျွန်တောင်ပင် ကြားက မနေတတ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သို့သော် အများအတွက် သူသာလျှင် ဒုက္ခခံလိုစိတ်မှာ သူတွင် ကိန်းအောင်းနေသည်။ တခါ ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ဆာစတက်ဖို့ကရစ် ဗမာပြည်သို့ ဝင်လာစဉ်က၊ မန္တလေးမြို့တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တို့ဗမာအစည်းအရုံး အမှုဆောင်များ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ကြသည်။ အစည်းအဝေး ပြီးသောအခါ အလုပ်အမှုဆောင်များ အားလုံးကို ရန်ပုံ ငွေကလေးဖြင့် တသုတ်စီ ပြန်စေပြီးလျှင်။ မန္တလေးမြို့တွင် သူနှင့် ကျွန်တော် ၂ ယောက်တည်းသာ ရန်ကုန်မှ ရန်ကုန်မှ ငွေပို့လိုက်မည် ဆိုသူတို့၏ အပြောဖြင့် ပြန်စရိတ်ကို စောင့်မျှော်ရင်း တဝဲလယ်လယ် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး နောက်တရက်မှာပင် ကျွန်တော်တို့ တည်းခိုနေသည့် ကွယ်လွန်သူ ဝန်ကြီး ဦးဘဦး၏ တိုက်တွင် မန္တလေး သခင်များက ကျွန်တော်တို့အား ထမင်းကျွေးခြင်းကို တာဝန် မယူကြတော့ပေ။ ကျွန်တော်နှင့် သခင်အောင်ဆန်းမှာ လက်ထဲတွင်လည်း လဘက်ရည်ဘိုးမျှပင် ပိုက်ဆံမရှိကြပေ။ တမြို့တရွာတွင် ယောင်လယ်လယ်ဖြင့် ဒုက္ခကြုံကြ ရပေတော့သည်။ ထိုအတွင်း ဒေါ်အုန်း၊ အမ်-အေ တို့၏ အိမ်မှ ထမင်းတနပ်နှင့် ကျောင်းဆရာ ကိုခင်မောင်လေး ယခု (ဗိုလ်ခင်မောင်လေး)က တရုတ်ဆိုင်တဆိုင်တွင် ထမင်းတနပ် ကျွေးမွေးပါသေးသည်။ သူတို့ တတွေမှာလည်း ထိုထက်ကျော်လွန်အောင် ပြုစုနိုင်အောင် ငွေကြေး မချောင်လည်ကြ၍ ထိုမျှသာ ကျွေးမွေးနိုင်တော့သည်။ စားရေးသောက်ရေးထက် ရန်ကုန်ပြန်နိုင်ရေးမှာ အရေးကြီးလှရာ၊ ရန်ကုန်မှ ငွေပို့လိုက်မည်ဟု ပြောသွားသူများကလည်း ငွေကြေး မချောင်လည်၍ ရုတ်တရက် မပို့နိုင်သေးဘဲ ရှိရာ၊ သခင်အောင်ဆန်းမှာ မနေသာတော့ရှာဘဲ။ တနေ့တွင် သူ၏အစ်ကို ဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ မန္တလေးမြို့၊ စမော်ကော် တရားသူကြီး ဦးဘသိုက် ယခု သာယာဝတီ တရားမဝန်ထောက် ခွင့်နှင်နေသူထံသို့ တနေ့တွင် သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ၎င်း၏ရုံးသို့ ကျွန်တော်ကို စေလွှတ်ခါ ငွေ ၁၀ တောင်းခိုင်းရာ ရရှိလာသည်။ တဖန် နောက်တနေ့တွင်လည်း နော်မံ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးတင့်ဆွေ (ယခု နယူးမင်းသတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ်)ထံသို့ သူနှင့် ကျွန်တော် သွားကြပြီး၊ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရန်စရိတ် တောင်းခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် နောက်တနေ့တွင် မန္တလေးမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ဆင်းခဲ့ကြရသည်။ ဤသည်တို့မှာ သူသည် အမှန်အားဖြင့် အခြားသူတဦးဦးအား မန္တလေးတွင် ထားရစ်ခဲ့ပြီး ပြန်နိုင်သည်။ သို့သော် - သူကား ထိုသို့မဟုတ် အများအတွက် ဒုက္ခခံမည် ဆိုသည့် စေတနာကောင်းကြောင့်ပင် မန္တလေးတွင် ပိုက်ဆံတပြားမှ မရှိဘဲ၊ ယောင်လယ်လယ်နှင့် တမြို့တရွာတွင် ဒုက္ခခံခါ နေရစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိပြီး မကြာမီ အထက်ဗမာပြည်သို့ သူ့တပ်ဖြင့် ချီတက်သွားပြီး ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ကျွန်တော်လည်း သခင်ဗအေးနှင့်အတူ အပါးသို့ တဖန် ပြန်လည် ရောက်ရှိရပြန်သည်။
တခါတွင် ဗိုလ်ချုပ်သည် အပြင်းအထန် ဖျားသဖြင့် အလံပြဘုရားလမ်းရှိ ဘီအိုင်အေ ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏အနီး၌ ကျွန်တော်ပင် နေ့ညမပြတ် စောင့်ရှောက် ပြုစုရသည်။
ထိုအခါက ဘီအိုင်အေ ဆေးရုံမှာ ဖွင့်ကာစက သာလျှင်ရှိသေး၍ ဗိုလ်ချုပ်၏ ဇနီးလောင်း ဒေါ်ခင်ကြည်၊ ၎င်း၏အစ်မ သခင်သန်းထွန်း၏ ဇနီးလောင်း ဒေါ်ခင်ကြီးနှင့် ကျွန်တော်၏ အစ်မ ဝမ်းကွဲတော်သူ ဒေါ်တင်ထွေးတို့ သာလျှင် ပြည်သူ့ဝန်ကို ထမ်းရွက်လျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ ဆေးရုံသို့ တက်နေရစဉ် အဖျားသက်သာလာသည့် တနေ့တွင် ကျွန်တော်အား “ဟေ့ - တင်ဦး၊ ငါ့ကို လက်စွပ်လဲဖို့ စိန်လက်စွပ်တကွင်း ဝယ်ပေးစမ်းကွာ” ဟု ပြောသည်။ ကျွန်တော်လည်း ပြုံးပြီး “ဘာလုပ်ဖို့လဲ” ဟုမေးရာ၊ “ငါမိန်းမ ယူတော့မလို့ကွ”ဟု သံပြတ်ပြောပြီး ဆက်လက်၍ “အင်္ကျီနှင့် လုံချည်ပါ ဝယ်ပေးပါအုံး”ဟု ပြောပြန်သည်။ ကျွန်တော်လည်း သူမပြောစဘူး ထူးထူးခြားခြား ပြောလိုက်သဖြင့် အံအားသင့်ကာ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောမိလိုက်သည်။ ထိုအခါသူက “ဟေ့ကောင် ရယ်မနေနဲ့ကွ ငါအတည်ပြောနေတာ”ဟု ထပ်ဆင့် ပြောပြန်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ပြုံးပြီးလျှင် ဘယ်သူနဲ့လဲဟု မေးရာ၊ “မခင်ကြည်” နဲ့ဟု ပြော၍ ပြုံးတုံးတုံး လုပ်နေသည်။ သို့မှ ကျွန်တော်လည်း သူ့အပါးမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ရတော့သည်။
တနေ့ သူ့အခန်းသို့ ကိုအုန်းမြင့်နှင့်အတူ ဝင်သွားကြသောအခါ ဆရာမတယောက် ဆေးလာတိုက်သည်နှင့် ကြုံနေသည်။ သူက “မသောက်ချင်ဘူး”ဟု အတင်းငြင်းဆို လိုက်သည်။ ဆရာမခမြာမှာ သူ့ကို ကြောက်သဖြင့် အခန်းတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားရသည်။ ထိုသို့ ဆရာမ ထွက်သွားလျှင် သွားချင်းပင် သူက “ဟေ့ တင်ဦး သွားပြောချေ၊ ဆရာမ မခင်ကြည်တိုက်မှ သောက်မယ်လို့”ဟု ပြောရာ၊ ကျွန်တော်သည် စောစောက ဆေးတိုက်ရန် ဝင်လာသော ဆရာမအား အကျိုးအကြောင်း ပြောပြလိုက်ရသည်။ နောက်တနေ့ နံနက်စာ စားချိန်တွင်လည်း ဆရာမတဦးက ထမင်းလာကျွေးရာ၊ “ဟင့်အင်း မစားဘူး၊ မခင်ကြည်ကျွေးမှ စားမယ်”ဟု ငြင်းဆိုနေပြန်သည်။ တဖန် “ဟေ့ တင်ဦး၊ မခင်ကြည် ခေါ်ချေ” ခိုင်းစေရာ၊ ကျွန်တော်လည်း ဤကိစ္စမျိုးတွင် သတ္တိကြောင်သူတဦး ဖြစ်သဖြင့် ဒေါ်ခင်ကြည်အားလည်း သွားမပြောရဲ၊ သူထံသို့လည်း မပြန်ရဲနှင့် ထိုနေ့တနေ့လုံး သူ့အပါးမှ ကျွန်တော် ရှောင်နေရတော့သည်။
သူသည် တခုခု လုပ်မည်ဆိုလျှင် မဖြစ်မနေ ဇွဲသန်သန်ဖြင့် ပြုမူတတ်သည့် သူ့ဝါသနာအတိုင်း၊ နောက်ဆုံး ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် မင်္ဂလာဆောင်သည်အထိ သူရောက်လိုသည့် အိမ်ထောင်ရေး ပန်းတိုင်သို့ ထမြောက်အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိခဲ့တော့သည်။
သို့သော် - သူမဖြစ်မနေ၊ အရောက်လှမ်းရန် ကြိုးစားအားခဲနေသော လွတ်လပ်ရေး ပန်းတိုင်ကား သူ့လက်လှမ်းနှင့် မီလုဆဲ့ အခါတွင် သူကား သူတပါး လက်ချက်ဖြင့် ကွယ်လွန်ရရှာပြီ။
အို … လူသတ်တို့ သင်တို့ကား
အလင်္ကာကျော်စွာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း တည်းဖြတ်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ စာရေးဆရာ၊ ရဲဘော်သခင်နှင့် ကျောင်းနေဘက်များ စုပေါင်းရေးသားသည့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်ထုတ် “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ” စာအုပ်မှ သခင်တင်ဦး ရေးသားတဲ့ “ကျွန်တော်တို့ မှတ်မိသိရှိသမျှ ဗိုလ်ချုပ်” ကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ [သခင်တင်ဦး (ယခု အသံလွှင်ဌာန) ရဲ့ ယခု ဆောင်းပါးကို မူလက ဂျာနယ်ကျော်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ယခု ထပ်မံ ဖော်ပြတာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီ စာအုပ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပြည်သူလူထုသို့ ပြောကြားခဲ့သော နောက်ဆုံး မိန့်ခွန်း(၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန် မြို့တော်ခမ်းမ)
ရန်ကုန် မြို့တော်ခမ်းမ ရှေ့တွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေသော အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း။
အစတုန်းက တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် အမတ်တွေကို ကိုယ့်နယ်ဆိုင်ရာ ကိုယ့်ပရိသတ်ကို တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာ ဘာတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ အစီရင်ခံဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ် အခြား တိုင်းပြည်တွေမှာ လွှတ်တော် အမတ်တွေကို တင်မြှောက်တဲ့ အခါ လွှတ်တော် အမတ်တွေဟာ အစည်းဝေး မရှိတဲ့ အချိန်အခါမှာ ကိုယ့်နယ်ကို ကိုယ်ပြန်ပြီး လွှတ်တော်မှာ ဘာတွေ လုပ်တယ် ဆိုတာကို အခြေအနေ အရပ်ရပ် အစီရင်ခံတဲ့ ထုံးစံ ရှိတယ်။ အဲဒီ ထုံးစံမျိုးအတိုင်း ဗမာပြည်မှာလဲ ဖြစ်စေချင်တဲ့ အတွက် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်မှ ရန်ကုန် နယ်အသီးသီးကို လွှတ်တော် အမတ်တွေပြန်ပြီး အစီရင်ခံတဲ့ အစည်းအဝေးပွဲတွေ လုပ်ပါလို့ ပြောတဲ့အခါ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် အမတ်တွေဟာ ကိုယ့်နယ်တိုင်းမှာ ပြန်၍ အစီရင်ခံကြတဲ့ နိုင်ငံရေး ရှင်းလင်းပွဲများ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ယနေ့လဲ ရန်ကုန် တမြို့လုံး အတွက် ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်က နဂိုရ်က ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း ယနေ့ ကျနော့် နိုင်ငံရေး ရှင်းတမ်းဟာ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ အနေမဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့နယ် တနယ်က တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာ ဘာတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာ နယ်သူ နယ်သားတွေ သိရအောင် အစီရင်ခံဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး ပြောဖို့ဘဲ။
ကနေဒါ တောင်အာဖရိက စတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ သွေးတူ သားတူ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အကုန်လုံး မျက်နှာဖြူ လူမျိုးတွေဖြစ်တော့ သူတို့အဖို့မှာ အင်္ဂလိပ် ရှင်ဘုရင်ကို သူတို့ ဘုရင်အဖြစ် ထားကြတယ်။ 'ဒိုမီနီယံ' သဘောကတော့ အင်္ဂလိပ် ရှင်ဘုရင်ထားပြီး အင်္ဂလိပ်နှင့် တအိမ်ထောင်တည်း သဘောထားပြီး နေရတဲ့ဟာဘဲ၊ ဥပဒေ သဘောအားဖြင့် မျိုးတူလျှင် သူ့တိုင်းပြည် သူအုပ်ချုပ် သွားတယ်။ အဲသည်လို အုပ်ချုပ်တဲ့ အခါမှာ တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ လွှတ်တော်တွေဟာ အာဏာ ရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ လက်တွေ့လုပ်တဲ့ နေရာမှာ လုပ်နိုင်တယ်၊ ကျွန်တော် အဆင့်အတန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အာဏာရှိတဲ့ အဆင့်အတန်း မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်တဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို အခြားနိုင်ငံက မေးတဲ့ အခါမယ် သမ္မတ နိုင်ငံလား၊ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံလား၊ ဒိုမီနီယံလား မေးလျှင် ဘယ်လို ဖြေရမလဲ မသိဘူး။ ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြန်ဖြေရလျှင် အစိုးရရဲ့ အခြေအနေအရ မရေရာလို့ မဖြေနိုင်ကြောင်း ပြောရမှာဘဲ။ အိန္ဒိယပြည်မှာကတော့ သြဂုတ်လမှာ 'ဒိုမီနီယံ' အစိုးရ ဖြစ်သွားလျှင် သူတို့ အစိုးရ အဆင့်အတန်းဟာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ အဆင့်အတန်းထက် မြင့်သွားမယ်။ သူတို့နယ်တွေမှာ ပေါ်လာမဲ့ တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်တွေမှာ အချုပ်အချာ အာဏာနှင့် ပြည့်စုံမဲ့ လွှတ်တော်တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်က ရေးဆွဲမဲ့ ဥပဒေတွေကို ချက်ခြင်း အတည်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို အိန္ဒိယပြည်က တပန်းသာတာ ရှိမယ်။ အဲဒီနေရာမှာ (ဗမာပြည်) တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ အချုပ်အချာ အာဏာ မရသေးဘူး။ အချုပ်အချာ အာဏာသဘော ဖြစ်တဲ့ အဆင့်အတန်းကိုတော့ ရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လို့ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးက ၁၉၄၆ ခု၊ ဇန်နဝါရီလမှာ ကျင်းပတဲ့ ပထမဆုံး ညီလာခံ သဘင်ကြီးက ဗမာပြည်ဟာ လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး လိုချင်တယ်။ တခြား ဘယ်လို အဆင့်အတန်းမှ မလိုချင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ သိတဲ့ အတိုင်းဘဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလက ဖဆပလ ပြင်ဆင်မှု ပဏာမ ညီလာခံ သဘင်မှ အချုပ်အချာ အာဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ထူထောင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တင်သွင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။
ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်က အလုပ်လုပ်တာ အင်မတန် ရှင်းတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့အတိုင်း လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ရအောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း တိုင်းပြည်က သိတဲ့အတိုင်း တနှစ်အတွင်း လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ရအောင် လုပ်နေဒါဘဲ။ တနှစ်လဲ မစေ့သေးဘူး။ တနှစ် ဆိုသော်လည်း အလျော့အပေါ့ နည်းနည်းပါးပါး ရှိမယ်။
တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်က ဗမာပြည် လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ရအောင် မလုပ်နိုင်လို့ ရှိရင် ကတိဖျက်တယ် ပြောနိုင်တယ်၊ အဲဒီ အချိန်အခါ အထိ လွတ်လပ်ရေးကို အေးအေးချမ်းချမ်း ရအောင် ကြိုးစားနေတယ်။ လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်သည် မအောင်မြင်သည်ကို ယခုအခါ မပြောနိုင်သေးဘူး။
လုပ်ငန်း မပြီးသေးဘူး။ ခင်းဗျားတို့ ပြီးတဲ့ တနေ့မှာ အောင်သလား၊ မအောင်သလား တွေ့ရမယ်၊ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဘယ်လို အဖွဲ့ချုပ်လဲ ဆိုတာ မြင်လာမယ်၊ ယခုအခါ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မပြောလိုဘူး ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ သွေဖယ်ပြီး လုပ်တာ မရှိဘူး။ သို့သော်လည်း အဲဒီလို လွတ်လပ်ရေး ရအောင် လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အလွယ်ဆုံး အကောင်းဆုံး အအေးဆုံးနည်းနဲ့ ရအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတယ် ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာအပြစ် ပြောစရာ ရှိသလဲ။ ဘယ်သူတွေက ဘာကြောင့် အပြစ်တင်ရသလဲ အဲဒီလို လုပ်တဲ့ နေရာမယ်၊ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်က ဒိုမီနီယံဘဲ လက်ခံတော့ မလိုလို ပြောဆို ရေးသား နေကြတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်က ယုံချင် ယုံနိုင်တယ်၊ မယုံချင် နေနိုင်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်မှစ၍ လွတ်လပ်ရေး စခန်း ဘယ်အထိ တက်လာသလဲ အစရှိ သဖြင့်အချက်အလက်တွေ မြင်ရမယ်။ တိုင်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးမှာ တဆင့် တက်သလား၊ လွတ်လပ်ရေး လုပ်ငန်း တဆင့် တက်လာတာတွေ ရက်များ မကြာမီ မြင်ရမယ်၊ ကျွန်တော် ယခု အစိုးရနဲ့ ဟိုတုန်းက အစိုးရတွေကို ယှဉ်ကြည့်လျှင် မတူဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီး ပြောရဲတယ်၊ အခု အစိုးရ အဖွဲ့ထဲမှာ လာဘ်စားတဲ့လူ မရှိဘူး၊ ယခင် အစိုးရတုန်းက တည့်တည့်လင်းလင်း ပြောရဲတယ် လာဘ်စားတဲ့ လူတွေ ရှိတယ်၊ ဒီလူတွေရဲ့ ပါတီ ပြန်လည် အာဏာရအောင် လုပ်နေတာကို တိုင်းပြည် အတွက် စေတနာ ပါသည် မပါသည် ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရန်သူနံပါတ် (၁) ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ ထောက်ခံရင် ခင်ဗျားတို့ လည်ပင်း ကြိုးကွင်းတပ်ရာ ရောက်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရဟာ တိုင်းပြည်လူထု ထောက်ခံလို့ ဖြစ်လာတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တယ်၊ တိုင်းပြည် လူထုက မကြည်ညိုဘူးလို့ သိလာတဲ့ တနေ့မှာ တွယ်ကပ် မနေဘူး ထွက်ပေးမယ်၊ သို့သော် တနှစ်လောက် စောင့်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို လူစားလဲ ဆိုတာ သိမယ်။ ရာဇဝင်မှာ အဆဲခံမဲ့ လူစား မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် သိမယ်၊ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အခါမယ် အခွင့်အရေး ပိုတာ ရှိမယ်၊ တာဝန်တွေ ပိုလာမယ်၊ ဒီတိုင်းပြည်ကို အင်္ဂလိပ်က အုပ်ချုပ်နေတုန်း အခါမှာ ဗမာပြည် ကာကွယ်ရေး အတွက် အင်္ဂလိပ်ရဲ့ တာဝန်ဘဲ၊ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အခါမှာ ဗမာပြည် ကာကွယ်ဖို့ ဗမာတွေရဲ့ အဓိက တာဝန် ဖြစ်လာမယ်။ ဟိုတုန်းကလို အေးအေးဆေးဆေး မဖြစ်တော့ဘူး။ တိုင်းပြည် ကာကွယ်ဖို့ ဗမာပြည်မှာ စစ်သားတွေ လိုလာမယ်၊ အဲဒီအခါ ဗမာတိုင်း အရွယ်ရောက်သူတိုင်း ကျန်မာရေးနဲ့ ပြည့်စုံသူတိုင်း စစ်မှုထမ်းဖို့ လုပ်ရမယ်၊ ခင်ဗျားတို့ တိုက်ချင်တိုက် မတိုက်ချင်လဲ တိုက်ရမယ်။ ဒါမှ လွတ်လပ်ရေး တာဝန် ကြေမယ်။
လွတ်လက်ရေး ရတဲ့အခါ ယိုးဒယားလို ဖြစ်ချင်သလား၊ တူရကီလို ဖြစ်ချင်သလား၊ အိုင်ယာလန်ပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား၊ ဆိုဗီယက် ရုရှားလို ဖြစ်ချင်သလား။ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အခါမှာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး စီမံကိန်းများကို အမျိုးမျိုးသော နည်းများဖြင့် လုပ်မှ ခပ်ရိုင်းရိုင်း ဗမာစကား ပြောရလျှင် အတော်ကို ပြဲအောင် ကျိုးစား လုပ်ကိုင်မှ အနှစ် ၂၀ လောက်ကြာမှ ဗမာပြည် တော်ရုံရောက်မယ် မလုပ်လို့ ရှိရင် ယိုးဒယားတောင် မှီမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခြား လွတ်လပ်သော တိုင်းပြည်များ ခြေတလှမ်း လှမ်းလျှင် ကိုယ်က ခြေ ၄-၅ လှမ်း လှမ်းနိုင်မှ တော်ရုံရမယ်။ အဲဒီလို မလုပ်ရင် ဟိုလူလာလဲ မျက်နှာချိုသွေးရ ဒီလူလာလဲ မျက်နှာချို သွေးရ၊ ဖာသယ်နိုင်ငံ ဖြစ်မှာဘဲ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်အောင် လုံ့လ ဝီရိယဖြင့် ကြိုးစား အားထုတ် လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုတယ်၊ ဗမာရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ ကျွန်တိုင်းပြည် ဖြစ်သည့်အတိုင်း ပုသိမ်ဘက် လှေပြိုင်ပွဲ တပွဲမှာ မြင်ရသလို လှေတစင်းကို အနည်းငယ် နိုင်လိုက်၍ ပန်းသို့ မဝင်ရသေးခင် လှေတက်ကို မြှောက်သလို ဗမာ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ အောင်မြင်ခြင်းသို့ မရောက်ခင် စိတ်ဓာတ် လျှော့ပေါ့တတ်မှု ရှိတယ်။ ဒီလို စိတ်မျိုး မထားဘဲ ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် မလျော့တမ်းလုပ်ဖို့ တည့်တည့်လင်းလင်း သတိပေးခဲ့မယ်။ ဗမာပြည်မှာ လူအမျိုးမျိုး အချင်းချင်း မကွဲဖို့၊ လူငယ်ပိုင်း ဖြစ်သော လက်ဝဲသမား အချင်းချင်း မကွဲဖို့ သတိပေးလိုတယ်။
နိုင်ငံရေးသမား ချေထိုးမှုကို ယောင်မှားသွားလို့ ရှိရင် ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေး မရဘဲ အိန္ဒိယပြည်လို အင်္ဂလိပ် ပေးသမျှ မယူဘဲ မနေနိုင် ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ ဗမာပြည်ဟာ မိအေး နှစ်ခါနာ ဆိုသလို စစ်ဒဏ် နှစ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည့် အတွက် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုများ ပျက်စီးခဲ့တယ်၊ ဗမာပြည်မှာ စားကုန် သောက်ကုန် အသုံးစရိတ် ကြီးမြင့်ခြင်းဟာ ခင်ဗျားတို့ ဘုံးပေါလအော သုံးမှုကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ခြိုးခြံ သင့်တာ ခြိုးခြံ ကိုယ့်အိမ် စိုက်စားသင့်တာ မစားဘဲ နိုင်ငံခြား သွင်းကုန်ပေါ်မှာ မှီစားသည့် အတွက် ဈေးကြီးတယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက် ဖောက်ပြန်တာလဲ ရှိမယ်၊ အဖွဲ့ အနေနှင့် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး၊ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်မှ စေတနာကောင်းဖြင့် လွတ်လပ်ရေး ရုပ်လုံးဖော်ရာမှာ အကောင်းဆုံးနည်း အအေးဆုံးနည်းနှင့် လုပ်နေတယ် နောက်ဆုံး အေးအေးဆေးဆေး နည်းနှင့် မရလျှင် ရတဲ့နည်း လုပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီ လွတ်လပ်ရေး လိုချင်ရင် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ စည်းကမ်း ညီညွတ်မှုတွေကို ထိမ်းသိမ်းထားပါ၊ ထူထောင်မှုကို လုပ်ကြပါ အဲဒီလို လုပ်ပြီးတဲ့နောက် ရှေ့ကို လွတ်လပ်ရေး အရသာ ကိစ္စအတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ စည်းကမ်းရှိဖို့၊ ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့၊ စောက်ကျင့်တွေ ပြင်ဖို့ လိုနေပြီလို့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့မယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ ရန်ကုန် မြို့တော်ခမ်းမ လူထု စည်းဝေးပွဲတွင် ပြည်သူများသို့ နောက်ဆုံး ပြောကြားခဲ့သည့် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းကို ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ပါတီ၊ အထွေထွေ သတင်းဌာနက ၂၀၀၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်မှာ ရှာဖွေ တင်ပြထားရာကနေ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆၃)နှစ်မြောက် မေ့မရနိုင်တဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကျဆုံးတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်နေ့ အတွက် ဒေါ်မေလှမြိုင်သီဆိုသည်. " အလေးပြုပါတယ် " သီချင်းအား ကိုသော်(ဂျပန်)မှ ခံစားတင်ပြပါသည်။
ပေးပို့ပေးတဲ့ ကိုသော်ကြီးအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဦးအဗ္ဗဒူ ရာဇတ် (၄၉) နှစ်၊ မန္တလေးမြို့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်၊ ပညာရေးနှင့် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဝန်ကြီး၊ ဒဏ်ရာ ၆ ချက် ရရှိပြီး နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။